comedy ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
တရုတ် ပာာသ သရဲကားပါ ၂၀၁၅ လောက်ကထွက်ခဲ့တာပါ ဇာတ်ကားကပုံစံကတော့ မလေးရှားမှာ ကောင်လေးတယောက်လှည့်လည်ရင်းနဲ့ ဆီဒစ် ဆိုတဲ့သရဲမလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဆီဒစ် ဆိုတဲ့သရဲမချောလေးပာာဆိုရင်ဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀ က အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ လက်စားချေလိုသေးတာကြောင့် သရဲမဖြစ်နေသေးတာပါ ကောင်လေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေအကူအညီနဲ့ ဆီဒစ်သူ့ကိုသတ်တဲ့တရားခံကိုရှာတွေ့သွားနိုင်မလား? မျက်စိရှေ့မှာမြင်တာအားလုံးကရော အမှန်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? အမှုကိုဖော်သွားရင်း ဇာတ်ကားကို မပျင်းရအောင် ဟာသလေးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာပါ သရဲမလေးကလည်းအရမ်းချောတော့ ကြည့်ရတာပိုမိုက်တာပေါ့ဗျာ ပင်ပန်းနေတဲ့နေ့လေးမှာ ဟာသကားလေးကြည့်ပြီး အပန်းဖြေလိုက်ပါ
အိမ်ခြံမြေအကျိုးတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့စတန်မင်တန်တယောက်လိမ်လည်မှုနဲ့ထောင်နန်းစံရမယ့်အဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာထောင်သားအချင်ချင်းမုဒိန်းကျင့်တဲ့အကြောင်းတွေကြားဖူးနေတဲ့စတန်ဟာသူ့ထောင်ကျရတော့မှာ ကိုတွေးပြီးကြောက်နေပါတော့တယ်။ထောင်မကျမှီအချိန်အတွင်းကြံမိကြံရာကြံရင်းစတန်တယောက်သူ. ကိုဘက်စုံတိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်သင်ပေးမယ့်ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆရာကျေးဇူးနဲ့ပဲထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါအားနည်းသူတွေအကူအညီလိုသူတွေကိုကူညီတိုက်ခိုက်ပေးရင်းဆရာကြီး တပါးဖြစ်လာပါတယ်။ ထောင်တွင်းအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုကာကွယ်ရင်းထောင်သားတွေရဲ့လေးစားမှုကိုရလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တဖက်မှာလည်းအကျင့်ပျက်ထောင်ဝန်ထမ်းတဦးရဲ့အမြတ်ထုတ်ဖို့ကြံစည်နေတာကလည်းစတန် အတွက်ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲတော့စတန်တယောက်ဘယ်လိုေ့ရှဆက်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ပေါ့ပေ့ါပါးပါးနဲ့ဟာသလေးတွေနှောထားတဲ့ BigStanဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ ထောင်တွင်းအနိုင်ကျင့်မှုအထူးသဖြင့်မုဒိန်းကျင့်မှုကိုရှုံ့ချဖို့ဦးတည်ပြီးဟာသလေးတွေနဲ့တင်ဆက်ထားတာပါ။ ညအားလပ်ချိန်တွေကိုရယ်ရင်းမောရင်းအပန်းဖြေလိုက်ရအောင်ပါ။ ဒီကားလေးကို၂၀၀၇ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဝင်ငွေ၈.၇သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့အသုံးအနူန်းတွေပါရှိလို. မိသားစုနဲ.အတူကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဖူးခင်ဗျာ
ဒီကားလေးအကြောင်းစမပြောခင် Blood Fest ဆိုတဲ့နာမည်အကြောင်းကို အရင်စပြောလိုက်ရအောင်…. Blood Fest ဆိုတာ သွေးသံရဲရဲနဲ့ကစားရတဲ့ ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကစားနည်းဟာ အရမ်းကိုကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ဧက၂၀ မြေကွက်ကြီးတစ်ခုမှာပြုလုပ်တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသော ” သွေးသံရဲရဲ ဧည့်ခံပွဲ ” ကစားနည်းလို့လည်း နာမည်ပေးထားပါတယ်….. အဲကွင်းကြီးထဲမှာ နာမည်ကြီး Horror ရုပ်ရှင်တွေထဲက လူသတ်သမားတွေရဲ့ ပုံစံသရုပ်ဆောင်တွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးတော့ ပါဝင်ကစားတဲ့ လူတွေကို ခြောက်လှန့်စေတာဖြစ်ပါတယ်… Vampire , Zombie , Clown , The Arborist , Red အစရှိတဲ့ နာမည်ကျော်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဒီ Horror ကားထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်…. ဟောလိုဝင်းညပါတီပွဲကို ပျော်ချင်လို့ဆိုပြီး ဒီကွင်းကြီးထဲကို ဂိမ်းကစားဖို့ရောက်လာကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးသုံးယောက်ဟာ တကယ်တမ်း ဂိမ်းမဟုတ်ပဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခု လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်… တစ်ကွင်းလုံးမှာလည်း အတုအယောင်တွေပြုလုပ်ထားတဲ့ သရဲကားတွေထဲကလို စိတ္တဆေးရုံတွေ သချိၤုင်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တွေထဲက နာမည်ကျော်လူသတ်သမားတွေနဲ့ ဂိမ်းကစားနေတာမဟုတ်တော့ပဲ သေရေးရှင်ရေးအတွက် အဲကွင်းထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတော့မှာပါ…. Horror ကားဆိုပေမယ့် ဒီကားဟာ ဟာသလေးတွေနှောပြီးရိုက်ပြထားတာပါ…. ဒါပေမယ့် Horror ကားရဲ့အနှစ်အရသာကိုတော့ ပျောက်ပျက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး… တချို့အခန်းတွေက ကြောက်စရာကောင်းသလို တချို့အခန်းတွေမှာလည်း စိတ်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ရယ်မောမိကြမှာပါ….. ဒါကြောင့် ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်သင့်မကြည့်သင့်ကိုကတော့ သင်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါ….
၂၀၁၇ လို့နာမည်တပ်ထားပေမယ့် ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ၂ရက်နေ့ မှထွက်လာတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်… ဒီကားဟာ တကယ့် Hip Hop ဂီတကို မီးမောင်းထိုးပြမယ့် ကားဖြစ်မှာ ပြီးတော့ producer ကလဲ Rap God ကြီးဖြစ်တဲ့ Eminem ပါ အဲ့တော့ rhyme တွေ rap တွေ ကအလန်းတွေ ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ သံသယ ဝင်စရာမရှိပါဘူး ဒီကားကို Eminem ရဲ့ အောင်လံတစ်ခုလို့ကင်ပွန်းတပ်ရမလိုပါပဲ Bodied အပြတ်သတ်အနိုင်ပိုင်းခြင်း Rap ရွတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဒီဇိုင်းကာလာရှိလဲ အာရှတိုက်သားတွေ ရင်းနှီးလာကြပါပြီ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အားနည်းချက် တွေကို စကားလုံးကာရန်အချိတ်ဆက်မိမိ နဲ့တင်ပြခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရပါလိမ့်မယ် များသောအားဖြင့် ဒီ Rap Battle တွေကို လူမဲ အသိုင်းဝိုင်းကပဲ အစဉ်ဆက်ရွတ်ကြ တာများပါတယ် ဆိုတော့ကာ လူဖြူတွေပေါ် ထားတဲ့ အမုန်းတရားတွေ မခံချင်စိတ်တွေ အရိုင်းဆန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက သူတို့ နှုတ်ဖျားမှာကာရန်တွေ အကူညီနဲ့ ပွင့်ထွက် ကျလာပါတယ် ဒါ့ကြောင့် Rapper ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ background က အများထင်သလို ရေပေါ်ဆီဘဝတွေ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ကျောင်းမှာ N စာလုံးအသုံးပြု ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူဖြူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဒမ်စာတမ်းတင်ဖို့ လုံးပန်းနေပါတယ် သူ့ခေါင်းစဉ်ကလဲ ထူးထူးဆန်းဆန်း N စာလုံးဘယ်လို သုံး ရမလဲ တဲ့ N စာလုံးဆိုတာတော့ Nigga ကိုပြော တာပါ လူဖြူတွေက Nigga ဆိုတဲ့စာ လုံးကို တရားဝင်သုံးပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး ဒါ underground အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ လူမျိုးစွဲ ကန့်သတ်ချက်တွေ ထဲက တစ်ခုပေါ့ ဒီတော့ အဒမ်က သူ့ စာတမ်းကိစ္စဖြစ် မြောက်ဖို့ သူကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းတဲ့ အနေနဲ့ underground ပွဲတွေသွားလေ့ လာပါတော့တယ် အဲ့မှာ သူ့အကြီးစားဖန် ဖြစ်တဲ့ ဘန် ဂရင်းနဲ့ တွေ့ခဲ့တာပေါ့ ဘန်ဂရင်းကို N စာလုံးအသုံးပြုပုံအကြောင်း မေးရင်း သူဘယ်တုန်းက မှ မတွေးဖူးအိပ်မက်မမက်ဖူးတဲ့ Rap ရွတ်တဲ့ ကိစ္စကို လူတစ်ယောက်နဲ့ ရွတ်ရဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ် အဲ့ကစပြီးအဒမ် တစ်ယောက်ပြောင်း လဲ လာတော့တာပေါ့ ဆိုတော့ကာ ဒီကားလေးမှာ reference တွေ တော်တာ်များများထည့်ထားတာတွေ့ရ ပါတယ် ပြီးတော့ underground rap battle တွေက type အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် 1 vs 1 ရွတ်တာ2vs2ရွတ်တာ freestyle ရွတ်တာတွေပေါ့ ဒါပေမယ့် cypher ရွတ်တာ တော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး မလိုလို့ မထည့်တာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် cypher သဘောမျိုးကို final battle မှာ2vs2ရွတ်တဲ့အခါ အရိပ်အမွက်တော့တွေ့မြင်ရမှာ ပါ အဓိက ဒီကားမှာပြထားတာက black culture ကို white people တွေဘယ်လို သဘောထားလဲ ပြီးတော့ 21 ရာစုရဲ့ ပူပူနွေးနွေး 2017-18 ဗားရှင်းမှာ ဘယ်လို Rap Battle မျိုးတွေပဲဖြစ်သင့်လဲဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြသွားတဲ့ သဘောပါ တကယ့် underground အကြမ်းအရမ်း Rap Battle တွေလုပ်ထားတာကျက်သီး ထစရာကောင်းလောက်အောင် သဘာဝဆန်လွန်းပါတယ်… ဒါကြောင့် လူငယ်အများစု ကြိုက်နှစ်သက်မဲ့ကားတစ်ကားဆိုရင် မှားဖွယ်ရာမရှိပါဘူး…
စားသောက်ဆိုင် ကျမ်းတော်ကြီး “‘ လူတွေ အပြင်မှာ ရောင်းတဲ့ ၅ ဒေါ်လာတန် ကို ဘာလို့ ငါတို့ဆိုင်မှာ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပေးပြီး လာစားကြလဲသိလား ”’ ”’ လက်မလောက်လေး အသားတုံးလေး ၂ခု ပန်းကန်ထဲထည့်ထားတာကို ဘာလို့ ဈေး၅သောင်း ၆ သောင်းပေးစားနေကြတာလဲ”’ ဋီး ဋချီး သံတွေ မိုးပျံ ၊ ပန်းကန်တွေ ဇွန်းတွေ ရိုက်ခွဲကောက်ပေါက်သံတွေ ဆူညံနေ အပူနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ကြားထဲ မီးပူတာတစ်မျိုးနားပူ တာတစ်မျိုး နဲ့ စိတ်မထိန်းနိုင်ရင် မျက်ခွက်ဆုတ် ပျက်သတ်သွားမယ့် စားဖိုဆောင်………… ဒီရုပ်ရှင်က IMDb Rating ၊ 6.6 Rotten Tomatoes 29% ၊ Metacritic score 42 ၊ CinemaScore B- တို့ရရှိထားပါတယ်။ ဝေဖန်မှု တွေ အဆိုးအကောင်းရောနှောရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင် တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ R Rating Movie အမျိုးအစား ဖြစ်လို့ ၁၇ နှစ်အောင်တွေ အုပ်ထိန်းသူတွေ နဲ့ ကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စတွေပါလို့ မဟုတ်ပါဘူး စကားပြောကြမ်းတာတွေ ကြမ်း တမ်းတဲ့အပြုအမှုတွေပါလို့ပါ။ဒီ ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ နယူးယောက်မှာ အကြိုပြသခဲ့ပြီး နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ အမေရိကန်မှာ The Weinstein Company ကစတင်ဖြန့်ချီထားခဲ့ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် ၊ ပြင်သစ် စကားပြောရုပ်ရှင်ဖြစ် ပါတယ်။ တစ်ကားလုံးကြာချိန် မိနစ် ၁၀၀ ရှိပါတယ်။ Budget ကန်ဒေါ်လာ ၂၀ မီလီယံ နဲ့ရိုက် ကူးထားပြီး Box Office မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၃၆.၆ မီလီယံ ပြန်လည်ရရှိထားပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ John Wells ရိုကူးထားပြီး၊ သူက ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေ တွေ ရိုက်ကူး တဲ့အပြင် ရုပ်သံထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ ရော စာရေး ဆရာအနေနဲ့ပါ လုပ်ပါတယ်။ ဒီကားက သူရိုက်ကူး ထားတဲ့နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အဓီကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေ ကတော့ မင်းသား Bardley Cooper နဲ့ Sienna Miller ဖြစ်ပါတယ်ပါတယ်။ မင်းသား Bardley ကတော့လူုတောတောများများသိရှိပြီးဖြစ်မယ်ထင် ပါတယ်။သူ့အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ သူက အော်စကာဆုပေးပွဲက နေစပြီး တစ်ခြား သောရုပ်ရှင်စပေးပွဲတွေအထိဇကာတင်စာရင်းနဲ့ ဆုတွေ ယူထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ၃ နှစ်ဆက် တိုက် အမြင့်ဆုံး အနုပညာကြေးရတဲ့ မင်းသား ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် တိုင်မ်း မဂ္ဂဇင်းရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ရှိဆုံးအယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာပါဝင်ထားနိုင်တဲ့ အထိကို အရှိန်အဝါကြီးပါတယ်။ Hangover ကတော့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့။ ဗြိတိန် အမေရိကန်စပ် မင်းသမီး Sienna ကလဲ BAFTA ၊ Golden Globe Award တို့လို ဆုပေးပွဲတွေအထိခြေဆန့်ထားနိုင်ယ်မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ် American Sniper မှာလဲ မင်းသားBardley နဲ့ အတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကဲဟုတ်ပါပြီ ဒါတွေက ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာထည့်ထားတဲ့ သီချင်းနာမည်က Barns Courteny ရဲ့ Fire ဆိုတဲ့သီချင်းပါ။ ဒီကားကို ရွှေးရတဲ့အကြောင်းအရင်း က ဒီကားကို ကြည့်မယ့်သူတွေထဲမှာ စားသောက်ဆိုင် လိုဟိုတယ်လိုဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေ ကိုပြောချင်တာ စားသောက်ဆိုင်ဆိုတာ ဟင်းရောင်းရုံနေရာမဟုတ်ဘူး ၊ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု ကို သဘော ပေါက်ပြီး professionalဆန်စေချင်တာရယ် ၊ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ အဓီပယ် ကို ပိုနားလည်သွားစေချင်တာရယ်၊ အသင်းအဖွဲ့ နဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းTeam Work က နေရာတိုင်းမှာဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးသိသွားစေချင်တာကြောင့်ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်က IT ခေတ်ပါ အရင် Facebook မပေါ်ခင်တုန်းကလို လာစားတဲ့သူတွေကို သမ္မတအိမ်တော် ထမင်းချိုင့် ပို့နေရတဲ့မျက်နှာ နဲ့ ရောင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီဇာတ်လမ်းက အပြင်က Gordon Ramsay ပုံစံ နဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ အခု MRTV4မှာပြနေ တဲ့ MasterChef ရဲ့မှုရင်းထုတ်လုပ်သူ လဲဖြစ် သူကိုယ်တိုင်လဲ Michaellin ကြယ်၃ ပွင့်တွေ၊ ၂ ပွင့်တွေ ၊ ၁ ပွင့်တွေရထား တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူပါ။ သူ့ကိုတော်တော်များများသိကြမှာပါ Facebook ပေါ်မှာ စားဖိုမှုးတွေ ကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ရစရာ မရှိအောင် ပြောတက်တဲ့ video ကိုတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ မတွေ့ဖူးလဲ ရိုက်ရှာလိုက်။ ဒီကားထဲမှာ ရိုက်ပြထားတဲ့ ဟင်းချက်တဲ့ပြကွက် တွေမှာ ဟင်းချက်ပုံချက်နည်းကို သေချာရိုက် မပြဘဲ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့လောက်ပဲပြပြ သွားတာ က ဇာတ်လမ်းအရှိန်ကို လျော့သွားစေပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာပါ တယ် Michaellin star ဆို တာဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ် လျောက်ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီ Michaellin star ဆိုတာ က စားသောက်ဆိုင်တွေကို starတွေပေးပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ပေး တဲ့ စားသောက်ဆိုင်လမ်းညွှန်စာအုပ်ပေါ့ တစ်ချို့သူတွေခေါ်ကြတာတော့ စားသောက် ဆိုင် လောက က ကျမ်းစာအုပ်တော် ပေါ့။ ထူးတာက အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းက အရမ်းကိုလျှိုဝှက် လွန်းတယ်။ ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ကို လုပ်ဆောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းစတင် တည်ဆောက် ခဲ့တာ ၁၉၀၀ ခုနှစ်လောက်မှာ Michaellin တာယာ တွေထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်း ရဲ့ ညီအကို နှစ်ယောက် Andreနဲ့ Edourad က စပြီးတည် ထောင်ခဲ့တယ်။ အစက သူတို့ ထုတ်တဲ့စာအုပ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံ အတွင်းက တာယာတွေ ဘယ်ဆိုင်မှာကောင်းတယ် ဘာညာ တာယာနယ်ပယ်နဲ့ ဆိုင်တာ ကိုပဲလမ်းညွန်ထုတ်ပေးခဲ့တာနောက်ပိုင်း ၁၉၂၆ မှာစပြီး စားသောက်ဆိုင်လမ်းညွန်ဆိုပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံက စားသောက်ဆိုင်တွေကို အဆင့်သတ်မှတ်တာတွေလုပ်လာတယ်။ နောက် ပြင်သစ်အပြင် တစ်ခြားသောနိုင်ငံတွေ ကိုပါ ရောက်လာတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ ရှိတဲ့ အကဲဖြတ်ဝန်ထမ်း တွေ ဘယ်လောက်ရှိတယ် ၊ ဘယ်လို ပုံစံ၊ ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိကြဘူး။ အဲ့မှာ လုပ်တဲ့အကဲဖြတ်သူတွေက သူတို့ဘာလုပ် နေတယ်ဆိုတာသူတို့ မိဘတွေကိုတောင်ပြောပြခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ သူတို့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို အမှတ်ပေးတဲ့ ပုံစံက အကဲဖြတ်တဲ့သူတွေ တစ် ယောက်ပြီးတစ်ယောက် သွားစားကြည့်ပြီးသူတို့ တွေ့တာအားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်သားလာ တယ် နောက်ပြီး အားလုံးပြန်စုပြီး အစည်းဝေး ထိုင်တယ် နောက် အဆင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက် တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ လာဘ်ထိုးဖို့ မလွယ်ဘူး။ အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းက ဖြုတ်ခံလိုက် ရတဲ့ သူတစ်ယောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြီး ပြောပြထားတာက အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲ သူတို့ တွေ က အရမ်းကို အထီးကျန်ကြတယ် ၊ တစ်ယောက်တည်းပဲ စားသောက် ကြရတယ်၊ နောက်အသေးစိတ်ကို မှတ်သားပြီး ပြန်တင်ပြရတယ်၊ ပြီးတော့ လုပ်အားခငွေက ကလဲ နည်းနည်းပဲရကြတယ်လို့ ပြောပြထားတယ်။ သူတို့ အားလုံး ၂၅ ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် Michaellin တို့ဘက်က မဟုတ်ဘူးလို့ သာငြင်းဆိုထားပါတယ်။ သူတို့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို လာတာဘယ်သူမှ လဲ မသိလိုက်ဘူး၊ ဘယ်အချိန်လာသွားတယ်မှန်း လဲမသိလိုက်ကြဘူး၊ဘယ်လိုအမှတ်အသားမျိုး ဘယ်လို မှလဲ မလုပ်ပြကြဘူး၊ စားပြီးပြန်သွား ကြတယ်၊ နောက်တော့မှ အဆင့် သတ်မှတ်တဲ့စာအုပ်ထွက်လာမှသိကြရတယ်။ အဆင့်တွေကို ကြယ် ၁ ပွင့် ကြယ် ၂ ပွင့် အမြင့်ဆုံး ကြယ် ၃ ပွင့် နဲ့ ဘာကြယ်မှမပေးတာ မျိူးသတ်မှတ်ပေးကြတယ်။ ကြယ်ရတာ တွေက ဥရောပ အမေရိက ဘက်ကဆိုင်တွေ နဲ့ ပြင်သစ်ပုံစံ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေ ရတာများတယ်။ဒါပေမယ့် ဂျပန်ကို Michaellin တွေ စပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ပေး တော့ ဆိုင်တွေတော်တော်များများ ကြယ်ရကြ တာတွေ့ရတယ် ။ စားဖိုမှုးတွေလဲ သူတို့ ကိုယ် သူတို့ အံ့သြနေကြတယ် ။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေထက် ဂျပန်ကိုပေးတာများ တယ်ပေါ့။ တစ်ချို့ဝေဖန်ကြတာက Michaellin က သူ့ ကားတာယာ company ဂျပန်နိုင်ငံကိုဖြန့်ဖို့ နာမည်ကောင်းရချင်လို့ ဘာလို့ ပြောကြတယ်။ တစ်ချို့က လဲ ဂျပန်အစားစာ တွေက သန့်ရှင်းတယ် လတ်ဆတ်တယ် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်လို့ ရတာလို့ပြောကြတယ်။ မှာ ကြယ်၃ ပွင့်ရသွားတဲ့ ဆိုင် ဆို သူ့ မီနှုးက ပြင်သစ် ပုံစံ ဘက်ကိုရောက် ရောက်သွားကြတယ်တဲ့။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကြယ်ရတဲ့ ဆိုင် သိပ်မရှိဘူး။ ဝေဖန်သူတွေပြော ကြတာ အာရှအစားအစာက ပြင်သစ်အစားအစာ တွေလိုမဟုတ်လို့လို့ ပြောကြတယ်။ Michaellin ကြယ်ရပြီးဆိုလဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လာစားမဲ့ ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာကြတော့ မှာပါ။ ကြယ် ၁ ပွင့်ရဲ့အဓီပယ်က လမ်းကြုံရင်သွားစား သင့်တယ် အဆင့်မှီတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကို sponsor နဲ့ shopping ထွက်တာဖြစ်ဖြစ် ကင်ဆာတို့ ဘာတို့ ညာတို့ဖြစ်လို ဆေး့သွားကု ရင်း၆ လလောက်ပဲ ခံတော့မယ် ဆိုရင် ဖြင့် သွားစားကြည့်ပေါ့။ စင်ကာပူမှာ ကြယ် ၃ပွင့် ဆိုင်ရှိပါတယ်။ ကြယ် ၂ ပွင့်ရဲ့ အဓီပယ်က သွားစားဖို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင် အဆင်ကျော်တယ်။ ကိုယ့် ATM Card ထဲ တစ်ယောက်ယောက်ဆီက မှားနိုပ်မီပြီး သိန်း ၅ ရာ ၁ ထောင်လောက် ဝင်လာရင် ဘာမှပြောမနေနဲ့ ကဒ်ကိုင်ပြီးစားသောက်ဆိုင် ကိုဒိုးတော့။ ကြယ် ၃ ပွင့်ရဲ့ အဓီပယ်က လုံးဝပြီးပြည့်စုံနေ မယ်။ လာချပေးတဲ့ ပန်းကန်ပြားကို ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်လက်ဗွေရာတောင်မတွေ့ရဘူး။ သိန်း ၁ ထောင်ကောက်ရရင်ဖြစ်ဖြစ် သိန်း ၁ သောင်း ကို၂ နှစ်ဆက် တိုက်ပေါက်ရင် ဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့ ၁ထောင်စုပြီး လန်လိုဂီနီတို့ ဖာရာရီ တို့ ဝယ်နိုင်တဲ့နေ့သွားကြည့်ပေါ့။ ပိုက်ဆံမရှိလဲ မှာပြီး ဟင်းက အရောင်တွေနဲ့ဆိုပြီး compalin တက် ပိုက်ဆံမပေးပဲ ထထွက်လာခဲ့လိုက် ငိငိ ကြယ် ၃ ပွင့်ရထားတဲ့ဆိုင် ကအရှေ့တောင်အာရှ နဲ့ အာရှမှာဆို မှာဆို စင်ကာပူ၊ ဂျပန် ၊ ကိုးရီးယား၊ မကာအို တို့မှာရှိတယ်။ ဈေးက ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက်က နေအမျိုးမျိုးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ Michaellin star ရစားဖိုမှုးတွေ ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဟိုနိုင်ငံတွေက ပြောင်းလာပြီးဒီမှာဆိုင်လာဖွင့်နေကြတာ ၃ ဆိုင် ရှိတာကို စုံစမ်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ ပထမဆုံးဆိုင်က ၂၀၁၅ လား ၂၀၁၆ လာမသိ နှစ်ယောက် သွားစားတာ ၁၆ သိန်းကုန်တယ်ဆိုပြီး Facebook ပေါ်မှာ ပလူပျံသွားတဲ့ Le Planteur ဆိုတဲ့ဆိုင် ။ နောက် The Seedနဲ့ Shwe Sa Bwe တွေပါ။ဈေးကတစ်ယောက်ကို ၈ သောင်းဝန်ကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ဝိုင်ပါတာ မပါတာ ဆိုင်ခြင်းမတူကြဘူး။ ! ဘေဘီတို့ ကိုကိုတို့ ကိုခေါ်သွားကြတော့ ငိငိ! ဒီကြယ်ကို စားဖိုမှုးလောက မှာဆို အော်စကာရ တယ်လို့ တင်စားခေါ်ကြတယ်။ ကြယ်က ရပြီးသွား ရင် အသေရသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ပြန်ရုပ်သိမ်း ခံရတက်တယ် ။ ဒီကြယ်မှာ ကောင်းတာရှိသလို တစ်ချို့ ကြတော့ ဒီကြယ်ရဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြဘူး။ ဒီလိုပါ ဒီကြယ်က ရထားတဲ့ အပွင့်ကိုလိုက် ပြီး ဝန်ထုပ်ကလဲပိလာကြတယ်။ စားဖိုမှုးတစ် ယောက် ပြောထားတာ သူ့ရထားတဲ့ကြယ်ကို ပြန် သိမ်းခိုင်းတယ် ဘာလို့ ဆို ကြယ်ရထားတော့ သူ့စံနှုန်းအတိုင်း တစ်သမတ်တည်းလုပ်နေရတယ် နောက်ပြီး အမှားခံလို့ကိုမရဘူး ၊လာစားတဲ့သူတွေ က အခြေနေအကုန်လုံးကို စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ဒဏ်တွေ မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ ကြယ်က လွယ်လွယ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ကြယ် ၃ပွင့်ရတဲ့ဆိုင်ဆို ၁ နှစ်မှာ လက်ချိုးရေလို့ တောင်ရတယ် ၃ ၊ ၄ ဆိုင်ဒီလောက်ပဲ။ ဒီစာတွေကို မနက် ၂နာရီမှာ ခေါက်ဆွဲပြုတ် လေးစားနေရင်း ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်HLKပါ။
“အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းကိုမှ ချမပေးနိုင်ဘဲ တက္ကသိုလ်တွေက ဘာတွေများပေးနေပါသလဲ? …” ” ကျွန်မတို့ဟာ ကျောင်းသားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး စက်ရုပ်တွေပါ…” “အသက် ၁၆နှစ်မှာငယ်သေးလို့ဆိုပြီး မဲပေးခွင့်မရ အရက်သောက်ခွင့်မရပေမယ့် ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အရေးအကြီးဆုံး လမ်းကြောင်းကိုတော့ ၁၆နှစ်မှာပဲရွေးခိုင်းလိုက်ကြတယ်… ရှင်တို့ လာနောက်နေတာလား? ” အပေါ်ကစာသားတွေဟာ ကိုယ်နှစ်သက်ပြီး ရင်ထဲထိမိတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ဒိုင်ယာလော့တွေပါ… ဒီကားလေးကို NetFlix ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွင့်ပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ တော်တော်လေး ပဏာသွားပါတယ် မသိရင် မြန်မာ့ပညာရေးကိုလှောင်ပြောင်ထားသလားတောင်ထင်ရပါတယ် တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို ၅နှစ် ၆နှစ်တက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းက မရှိ သူများနိုင်ငံကကျောင်းတွေမှာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ Job Fair တွေ Job Hunting အတွက် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ရတယ်ဆိုတာတွေကို သင်ကြာပေးပါတယ် မြန်မာကကျောင်းတွေမှာတော့ နတ္တိပါ အဆံမရှိပဲမြေပဲတောင့်လိုပါပဲ အပြင်ပန်းကတော ဟုတ်နေတာပဲ လက်တွေကမှာတော့ အလုပ်မရှိယောင်၆၀ လူငယ်တွေဟာ ဒု နဲ့ ဒေးပါပဲဗျာ ကဲ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုသွားလိုက်ရအောင် “Candy Jar”ဟာ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ Debate ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို အခြေပြုပြီး လက်ရှိပညာရေးစနစ်ကို သုံးသပ်မိစေဖို့ မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ အထွေအထူးမညွှန်းတော့ပဲ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါလို့ CM ပရိသတ်များအတွက် လက်တို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားထဲမှာ ပြောတဲ့စကားတွေကတော့ တော်တော် လေးထိမိပါတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်
Charlotte web (2006)
ကလေး-လူကြီး။ ကျား-မ မရွေးကြည့်လို့ရတဲ့ ဇာတ်ကားလေးလာပါပြီ။ ဇာတ်ကားတစ်ကားရဲ့ အရသာကို အပြည့်အ၀ ပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ကား… သိင်္ဂါရ ရသ၊ ဂရုဏာရသတွေ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ကား… အများနဲ့ မတူတစ်မူထူးနေတာကတော့ ဇာတ်လိုက်ကျော်က ချစ်စဖွယ် ဝက်ကလေးဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားလေးက အကယ်ဒမီ ၁၁ ဆု လျာထားခံရပြီး.. ၉ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် အဓိက ကတော့.. 2006 ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး… မိသားစု ရုပ်ရှင်ဆု အကောင်းဆုံး ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်တေးဆု စသည့်ဆု တွေကို တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ကြီးသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကြောရိုးကတော့ နွေဦးပေါက်ဝက်ကလေးရဲ့ ရာသီကုန်မှာ ရောက်ရှိလာမဲ့ ကံကြမ္မာဆိုး ကြီးကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲဆိုတာ..ဆက်လက်ရှု့စားပေးပါဦး။
ဒီတစ်ခါ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ကားလေးကတော့ disney Cinderellaမဟုတ်တဲ့ မင်သားမင်းသမီးချောချောလေးတွေပါတဲ့ Cinderellaကားလေးပေါ့နော် ဒီကားလေးထဲမှာတော့ ကောင်မလေးဟာ သူ့အဖေဆုံးပြီးနောက်မှာ သူ့မိထွေးသားအမိနဲ့နေတယ် သူ့မိထွေးက သူတို့နေနေတဲ့အိမ်ကြီးကို ရောင်းဖို့ လုပ်နေတယ် သူ့မိထွေးက အိမ်ကြီးကို တကယ်ပဲရောင်းဖြစ်သွားလား သူတို့သားအမိသုံးယောက်က ကောင်မလေးကိုရော ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဆံကြလဲ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးကရော ဘယ်လို တွေ့ကြလဲ မသိချင်ကြဖူးလား ဒီကားလေးက ကိုယ်တွေကြည့်ဖူးတဲ့disney Cinderellaနဲ့လည်း မတူတဲ့အပြင် ချစ်စရာလည်းကောင်းတာမလို့ အားလုံးပဲ ကြည့်ကြည့်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်နော်
Crazy Rich Asians (2018) Blu-Ray 1080p
ရေချယ်ချုဟာ နယူး ယောက်တက္ကသိုလ်က စီးပွား ရေးပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ နစ်ခ်ရန်းဆိုတဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ နစ်ခ်က သူ့အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း ကောလင်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ လူပျိုရံလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ရယ်၊ သူ့မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့အ တွက်ရယ်ဆိုပြီး ရေချယ်ကိုသူနဲ့ အတူ စင်ကာပူကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ် ခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်းလွှာတွေစီးတဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ထား တာကို တွေ့လိုက် တာ နဲ့ ရေချယ်တစ်ယောက် နစ်ခ်ဟာ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကလာတာလားလို့မေး ပေမယ့် နစ်ခ်ကတော့ သိပ်ထူး ဆန်းဟန်မပြဘဲ မိသားစုက အိမ် ခြံမြေလုပ်ငန်းလုပ်တယ်လောက်ပဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူကိုရောက်တဲ့အခါ မှာ ရေချယ်ဟာ နစ်ခ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောလင်းနဲ့ သူ့ချစ်သူအရာ မင်တာလီတို့ စုံတွဲနဲ့ခင်မင်ခဲ့ပြီးနစ်ခ်တို့မိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်စိတ်မပူဖို့ ရေချယ်ကိုအားပေးခဲ့ ကြပါတယ်။ ရေချယ်ကလည်း စင်ကာပူကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ကောလိပ်တုန်းက သူ့အခန်းဖော် ဂိုပိတ်လင်နဲ့ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ပိတ်လင်နဲ့ ဆုံတဲ့အခါမှာ တော့ ပိတ်လင်ဟာအရမ်းကို ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရွှေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကြီးရခိုင်မှာ နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရ လို့ အရမ်းကိုအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါ တယ်။ ရေချယ်က ပိတ်လင်ရဲ့ မိသားစုနဲ့ စကားပြောဆိုရင်း သူသွားတွေ့ရမယ့် သူ့ချစ်သူနစ်ခ် ရန်းရဲ့ မိသားစုဟာ ဂိုမိသားစုထက်အဆပေါင်း များစွာချမ်းသာ သလို သြဇာလည်းကြီးတဲ့မိသားစု ဆိုတာ ရုတ်တရက်သိခဲ့ရတဲ့အ တွက် စိုးရွံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ရေချယ်ဟာ ကြီးကျယ်ခမ်း နားတဲ့ ပါတီကြီးတစ်ခုဆီကိုနစ်ခ် နဲ့ လိုက်သွားခဲ့ရပြီး သူကသာအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုမသိ ပေမယ့် သူ့ကိုတော့ လူတွေကသိနေပြီး သတိထားကြည့်နေခဲ့ကြပါ တယ်။ နစ်ခ်တို့အိမ်ကအထိန်းကို နစ်ခ်ရဲ့ အဘွားထင်ပြီး မှားနှုတ် ဆက်ခဲ့သလို နစ်ခ်ပေါ်ကိုလည်း ဝိုင်ခွက်မှောက်အောင်လုပ်မိတဲ့ ရေချယ်တစ်ယောက် သတိထား ကြည့်ခံနေရပါတယ်ဆိုမှ တလွဲ တွေချည်းလုပ်မိခဲ့ပါတယ်။ ရေချယ်ကို နစ်ခ်ရဲ့အမေအယ်လီနောက သဘောမကျတဲ့ပုံစံပြခဲ့ပေမယ့် နစ်ခ်အဘွားက တော့ ရေချယ်ကို အိမ်ကိုလာလည်ဖို့ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်။ နစ်ခ်ကိုလိုချင် နေတဲ့ အမန်ဒါဆိုတဲ့မိန်းကလေး ကလည်း သူနဲ့ နစ်ခ်က လက်တွဲ တော့မှာလိုလို ရေချယ်သိအောင် လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေက ရေချယ့်ကို ငွေကြောင့်နစ်ခ်ကို အပိုင်ကြံသလိုလို စကားတွေ၊ အပြုအမူတွေနဲ့ ထိုးနှက်ကြပေမယ့် သနားစရာရေချယ်က တော့ နစ်ခ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာဆိုဘာမှသိမထားဘဲ ရုတ်တရက်ကြုံရတဲ့ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံခဲ့ရ ပါတယ်။ ရေချယ်တစ်ယောက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားလွန်းတဲ့ မိသားစုထဲကို ဝင်မှာလား၊ နစ်ခ်ကကောရေချယ့်အပေါ် ဘယ်လိုသဘော ထားတာလဲ၊ အလွှာမတူတဲ့ချစ် သူနှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းက ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းမလဲဆိုတာ တော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Constance Wu , Henry Golding , Michelle Yeoh,Gemma Chan , Lisa Lu၊ Nico Santos, Ronny Chieng စတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ပါ တယ်။
Crazy, Stupid, Love . (2011)
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများမှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများမှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ family life တစ်ခုဖန်တီးဖို့ပဲ…ဒါကြောင့်အချစ်စစ်တစ်ခုရှာဖွေတယ် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်သင့်တော်တဲ့သူလို့ထင်တဲ့သူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်..ပြီးတော့.. မျိုးဆက်လေးတွေမွေးဖွားရင်း သိပ်တော်တဲ့ကလေးတွေအဖြစ်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ် …အလုပ်တစ်ဖက် သားသမီးတစ်ဘက်နဲ့ဆိုတော့ လင်မယားအကြားဆက်ဆံရေးကိုမေ့လျော့နေမိတတ်တယ်….အနုပညာမြောက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်တောင်ဖွင့်ဖန်များ ကြားရဖန်များလာရင် ညည်းငွေ့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်သက်ခြင်းကို နှစ်သက်ခြင်းကပဲဖျက်ဆီးသွားတတ်တယ်…..အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ဒီလိုပဲထင်ပါ့ တစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူတွေဟာ နှစ်သက်ခြင်းကြိမ်ဖန်များစွာဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ကြာလာတော့ညည်းငွေ့တတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ် နှလုံးသားဟာ အဟာရမဲ့လေတော့ ကလေးတွေရဲ့သံယောဇဉ် နှောင်ဖွဲ့ခြင်းအသိအမှတ်ပြုလက်ထပ်စာချုပ်တွေဟာ အဓိပါယ်မဲ့သွားတတ်တယ်….ကျွန်တော်ပြောတာတွေက ယေဘူယျအမှန်တရားဖြစ်နိုင်သလို ချွင်းချက်အမှန်တရားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်….ဒီကားလေးက ကလေး ၃ယောက်ရှိတဲ့မိခင်နဲ့မိခင်ကြားအဆင်မပြေပုံတွေနဲ့ မြှာပွေတတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အချစ်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတတ်ပုံလေးကိုရိုက်ပြထားတာပါ…..ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့တင်ဒီကားရဲ့Plotကိုသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ် ပြီးတော့ ဒီကားက သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း နာမည်ကြီးတွေပါပဲ …… Steve Carell,Ryan Gosling,Julianne Moore,Emma Stone,Marisa Tomei,Kevin Bacon …LALALAND က Ryan Goslin နဲ့ ကျော့်အချစ်တော်လေး Emma Stoneလေးတော့အနည်းဆုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်……ကိုင်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျ
ကျွန်မတို့ဘဝမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ငါသာဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်နေမှာလဲ အဲ့ဒီတုန်းကသာဟိုလိုရွေးခဲ့မိရင် ခုချိန်တော့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမှာ အစရှိသည်ဖြင့်ကိုယ့်ဘဝနောက်ကြောင်းကိုပြန်သုံးသပ်ရင်းကြိတ်မနိုင်ခဲမရ(သို့)ကျေနပ်နေရမယ့်အခိုက်အတန့်တွေ ကြုံခဲ့ဖူးကြမှာပါ အကြောင်းသေးသေးလေးတစ်ခုကနေ အပြောင်းအလဲအများကြီးထိဦးတည်သွားနိုင်တာမဟုတ်လား… ဒါကို ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းလေးကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်… ဘက်ကီဟာသာမန်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလေးတစ်ဦးပါ တစ်နေ့မှာတော့ ကုမ္ပဏီအတွက်အရေးကြီးတဲ့စာတမ်းတွေပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန် ဘေးအိမ်ကသောင်းကျန်းနေတဲ့ကာရာအိုကေသံတွေကြောင့်အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ရပါတယ် မနက်ကျကော်ဖီဆိုင်အဝင်မှာလက်တော့ပေါ်ကော်ဖီခွက်မှောက်ကျပြီး ဘက်ကီပြင်ဆင်ထားသမျှအချက်အလက်အားလုံးပျက်စီးသွားပါတော့တယ်… ညကအိပ်ရေးပျက်ရာကနေ နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီကနေတောင်အလုပ်ထွက်လိုက်ရတဲ့အထိပါပဲ… အလုပ်ထွက်ပြီးဘက်ကီတစ်ယောက်မိသားစုကိုထားခဲ့ပြီးကမ္ဘာပတ်ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ပါတော့တယ်… ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာက တကယ်လို့များသာ အခြားတစ်ဖက်ကဘက်ကီဟာ အဲ့ဒီညမှာအိပ်ရေးမပျက်ခဲ့ဘဲ အလုပ်မှာအောင်မြင်မှုရှိသွားခဲ့မယ်… မိသားစုကိုပိုအချိန်ပေးဂရုစိုက်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော… ဘက်ကီ့ဘဝဘယ်လိုတွေများဆက်ဖြစ်မှာလဲ? အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ရတဲ့ဘက်ကီလည်းခရီးတွေထွက်ပြီး ဘယ်လိုတွေများဆက်ဖြစ်မှာလဲ? သင်တို့သာ ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့ရင်ရော ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုရွေးချယ်မှာလဲဆိုတာတွေကို… ဘဝနှစ်ခု အပြိုင်ယှဉ်ပြပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ဆုပေါင်း ၆ ဆုလောက် ရထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး ဆုရဖို့ စကာတင် ၃ ခါ လောက် ရှိခဲ့ပါသေးတယ် အသက် ၁၃ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ကေလာဒေး ဆိုတဲ့ ၈ တန်းကျောင်းသူ ဆယ်ကျော်သက် ရဲ့ ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှု လေးကို ပုံဖော်ထားတာပါ ကေလာ မှာ သူ့ကို ချစ်ပေးမဲ့ အဖေသာ ရှိပြီး အမေ မရှိတော့ပါ ဒီတော့ ကာ တိုင်ပင်ရလောက်တဲ့ အနေအထားတစ်ချို့ အဖေဆီမှာ မရှိတဲ့ အတွက် အဖေက ဘယ်လိုပဲ အမေနေရာက ဂရုစိုက်စိုက် ကေလာ အတွက် တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ သင်ကြားပြသပေးမဲ့သူ မရှိပါဘူး ကေလာ ဟာ ရုပ်နည်းနည်းဆိုးပြီး ဗိုက်ပူပူ ခါးတုတ်တုတ် ကလေးမလေးပါ ဒါကြောင့် ကျောင်းမှာ သူဟာ အပယ်ခံလိုလို ဘာလိုလိုတွေ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းရဲ့ ဆယ်လီတွေကြား သူ့ကိုကြိုက်မယ့် ကောင်လေးလဲ မရှိပါဘူး သူ့မှာ အဖော်ကောင်းဆိုလို့ သူပိုင်တဲ့ Youtube Channel လေး တစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့ဒီမှာ သူတင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက လူတစ်ယောက် ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ဘယ်လို လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ရမယ် ဘာညာတွေ လျှောက်ပြော လျှောက်လုပ်ပြ နေပေမဲ့ အပြင်က လက်တွေ့ ဘ၀ မှာတော့ သူက လူကြောက်တက်ပြီး လူတွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေး နေချင်သူ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…. ကေလာ အနေနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ ထားကြည့်မယ် လူငယ်တွေ လုပ်နေကြ အရာတစ်ချို့ လုပ်မယ် ကစားပွဲတွေ ပါတီတွေ တက်မယ် ရည်းစားထားကြည့်မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အကုန်လျှောက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူလုပ်လိုက်တိုင်း အရာရာတိုင်း တလွဲတွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ…. ဆယ်ကျော်သက် တစ်ယောက်ရဲ့ အလွဲလေးတွေ စိတ်တိုင်းမကျတာတွေက ကျနော်တို့လို့ ငယ်ဘ၀ ကို ပြန်သတိရစေပါတယ် ဒီဗီဒီယို ကိုသားသမီး အငယ်လေးတွေ ရှိတဲ့ မိဘတွေ လဲ ကြည့်သင့်ပါတယ်…
F2_ Fun and Frustration(2019)
ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်က စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ယောကျာ်းကောင်းတွေက မိန်းမကြောက်ကြတယ်လို့ရေးဖူးတယ်….. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ယောက်ျားအားလုံးနီးပါး မိန်းမကြောက်ကြပါတယ်… ဒီကုလားကားကတော့ မိန်းမစိတ်ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ မယားညီအစ်ကိုနှစ်ကောင်နဲ့ သူ့တို့မိန်းမတွေ အကြောင်းပေါ့။ ယေဘုယျဆန်ဆန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကားထဲက ညီအကို(၂)ယောက်ဟာ ယောင်္ကျားထုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး မိန်းကလေး(၂)ယောက်ကတော့ မိန်းမထုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်… အချို့ ကုလားကားတွေလို Over actionတွေမပါတဲ့အပြင် Over actionတွေကို သရော်သွားပြီး သမီးရည်းစားအနေအထား အိမ်ထောင်သည်အနေအထား နှစ်ဘက်မိဘဆွေမျိုးတွေကိုပတ်သက်ရတဲ့အနေအထားအားလုံးကို ပညာသားပါပါလေးနဲ့ ဟာသလေးတွေစွက်ပြီး ပြသွားပါတယ်…. မိန်းမနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအဖို့ ရှောင်ရန်ပညာလေးတွေရနိုင်သလို မိန်းမကြောက်ရသူတို့အဖို့ ငါတို့သည် ယောင်္ကျားသားများသာလို့ ခပ်တည်တည်တွေးရမယ့် ကားလေးပါ.. အမျိုးသမီးတို့အဖို့တော့ ကမ္ဘာဦးကထဲက ရှိခဲ့တဲ့ နိယာမကို ဘယ်သူကများ တွန်းလှန်နိုင်ပါ့မလဲလို့ ပီတီဟန်တွေအပြည့်နဲ့ ပြုံးနိုင်မယ့်ကားဆိုပါတော့… ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ရယ်မောပျော်ရွှင်ရသလို ပညာလည်းရတဲ့ ကောင်းလည်းကောင်းတဲ့ ကုလားကားတွေမှ သဘောကျတဲ့သူတွေအဖို့ ခံစားကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်… ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ WiRa Aung ပဲဖြစ်ပါတယ်…
2017 ထွက် အချစ်ဟာသဇာတ်မြူးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြိုက်တွေ့မယ့်ကားလေးပါ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲက အကြိုက်တွေ့မိတဲ့ စကားလေးကတော့ “အချစ်ဆိုတာ နောက်တခါအခွင့်အရေးပေးဖို့ထိုက်တန်တယ် တဲ့ပြီးတော့ အချစ်စစ်ဆိုနောက်တခါ အခွင့်အရေးထပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ ” ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကတော့ aprilynn ဟာ သူ့ မင်္ဂလာပွဲလေးရဲ့ သူတို့သားဖြစ်တဲ့ Randy နဲ့ လွဲချော်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ အွန်လိုင်းမှ တဆင့်ပျံနှံသွားပါတယ်မြို့တော်ဝန်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Randy ဟာမြို့တော်ဝန်အဖြစ်ဝင်ပြိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် Aprilynn ကိုပစ်ထားခဲ့တာက သူ့ရဲ့ Image ကိုထိခိုက်စေပြီးထောက်ခံမဲတွေလျော့လာစေပါတယ် ပိုပြီးဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတာက သူဟာ သူတို့သားရဲ့အဖေက ငှားထားတဲ့ Public Relation agency က raffy နဲ့ ဆုံတွေ့မိပြီး raffy ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေနဲ့ သူဟာ Randy ကို သိက္ခာမကျစေဖို့အတွက် ဟန်ဆောင်နေရပါတယ် ဒီလိုနဲ့အနေခြင်းနီးလာတဲ့ Aprilynn ဟာ Raffy ကိုချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ် ဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက်ကြကြရမှာပါ
၁၉၈၇ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Three O’Clock High ဆိုတဲ့ လူငယ်ဟာသဇာတ်ကားကို မှီ ငြမ်းပြီး ဆန်းသစ်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒီကန့်ဘဲလ်ဟာ အနေ အေးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်း အင်္ဂလိပ်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ် ပြီး စီနီယာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ရဲ့ နောက်ပြောင်ကျီစယ်မှုတွေ၊ ဒုက္ခပေးမှုတွေကြားမှာ လိုက် လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကြိုးစား နေထိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်။ အန်ဒီ အဲဒီလိုနေနေတဲ့ ကြားက တစ်ရက်မှာတော့ အခြေ အနေတွေက အဆိုးဘက်ကို ရောက်သွား ခဲ့ပါတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုရင် အန်ဒီကြောက် ရတဲ့ခပ်ဆိုးဆိုးဆရာတစ်ယောက် ကို အလုပ်ပြုတ်အောင် လုပ်မိသ လိုဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ခပ်ဆိုးဆိုးပုဂ္ဂိုလ် ရွန်စထရစ်လန်း ဟာ ရှေးရိုးဆန်တဲ့ အလေ့အထ တွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အတွက် အန်ဒီ ကိုကျောင်းပြီးချိန်မှာ မကျေပွဲဆင် နွှဲဖို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာနှစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်ပွဲ ဟာ ကျောင်းသားတွေကြားမှာ ရော အွန်လိုင်းမှာပါ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ ပြီး လူစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်း အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ နဂိုကတည်းက ကြောက်လည်း ကြောက်တတ်၊ အေးလည်းအေး တဲ့ အန်ဒီအဖို့ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုကြီး က အရမ်းထိတ်လန့်စရာတစ်ခု လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ အန်ဒီ ဟာ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရ မယ်ဆိုတာကို အခြားဆရာ၊ဆရာ မတွေဆီက အကြံတောင်းပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတော့ တယ်။ ဒီကြားထဲမှာလည်း ရွန်စထ ရစ်လန်းရဲ့ ပြဿနာရှာမှုတွေ ကြောင့် အန်ဒီဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်တဲ့နေ့မှာ ထိပ် တိုက်ရင်ဆိုင်မှာလား။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာတော့ ရယ်ရင်းမောရင်း ကိုယ်တိုင်သာ ဆက်ကြည့်လိုက်တော့နော်။ ရုပ် ရှင်ဝေဖန်သူတွေကတော့ စကား လုံးကြမ်းကြမ်းတွေသုံးထားလို့၊ ဆရာတွေက ဆယ်ကျော်သက် တွေလို ပြုမူလို့စသဖြင့် ဝေဖန် ထားမှုတွေတော့ ရှိထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အန်ဒီကန့် ဘဲလ်အဖြစ် ချာလီဒေး၊ ရွန်စထ ရစ်လန်းအဖြစ် အိုက်စ်ကျူဘ်၊ မစ္စမိုနက်အဖြစ် ခရစ္စတီးနား ဟန် ဒရစ်စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေပါဝင် ထားကြပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ 2006 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းလေး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ IMDB 6.6 အထိရရှိထားပြီး မင်းသားကြီး Hugh Jackman နဲ့ Kate Winslet တို့က အဓိကအသံသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ် ရော်ဒီဆိုတဲ့ အိမ်မွေးကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမရှိပဲ အထီးကျန်စွာနေရသူတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့မှာတော့ ထူးဆန်းတဲ့ကြွက်တစ်ကောင်က သူ့ဆီရောက်လာပြီး သူ့နေရာကိုအပိုင်စီးလိုက်ပါတော့တယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ရော်ဒီဟာ ရေဆိုးမြောင်းထဲကို နှင်ချခံရပြီး မြေအောက်မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ် အိမ်ပြန်လမ်းကိုရှာဖွေရာမှ ‘ရီတာ’ ဆိုတဲ့ကြွက်မလေးတစ်ကောင်နဲ့ဆုံတွေ့မိတယ် ရီတာဟာ လူဆိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ပြဿနာရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရော်ဒီပါဝင်ပတ်သက်မိတဲ့နောက်ပိုင်း ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲ အိမ်ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ရော်ဒီတစ်ယောက် အန္တရာယ်တွေကြားကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား… ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖန်တီးထားတာမို့ အချိန်ပေးရကျိုးနပ်မဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းလေး တစ်ကားပါပဲ
ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ ဒရမ်မာအမျိုးအစားကားဖြစ်ပါတယ်။။ ကန်းထရီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လီယမ်ဟာ အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်း ချစ်သူကောင်မလေးကိုလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်… နောင်ရှစ်နှစ်အကြာမှာမွေးရပ်မြေကသူငယ်ချင်းဟောင်း တစ်ယောက်ရဲ့အသုဘကိုလာရင်းနဲ့ သူတို့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်…. အောင်မြင်မှုှု့နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ ချစ်ရသောချစ်သူကိုပစ်ထားခဲ့ရပေမယ့် လီယမ်မှာ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့နောက်ဆုံးပို့ထားတဲ့ Voice Message လေးရှိတဲ့ ဖုန်းအစုတ်လေးကိုပဲ ၈ နှစ်ကြာကြာပေတေကိုင်ရင်း မနက်နိုးတိုင်း အိပ်ခါနီးတိုင်း နေ့တိုင်းကိုအဲဒီ Message လေးနားထောင်ပြီး သူ့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းလိုလိုကို ဖြတ်သန်းခဲ့တာပါ…. ဒီလိုမျိုးချစ်သူကို ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကတော့ တကယ်ကိုလေးစားစရာပါပဲ… သင်တို့မှာသာအဲလိုချစ်သူတစ်ယောက်ရှိရင် ဒီကားလေးကို Share ရင်း သူ့ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါ…. တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာအနားမှာရှိနေပြီး ဂရုစိုက်နေမှ အချစ်လို့မခေါ်ပါဘူး… အချစ်ဆိုတာ သူ့အနားမှာရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သူနဲ့ပတ်သတ်သမျှအရာတွေအကုန်လုံးကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲစိတ်လေးတစ်ခုပါ… ဒီကားလေးဟာအေးစက်တဲ့ကားလေးတစ်ကားလို့ထင်ရပေမယ့် ဒီခေတ်အသုံးအနှုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် တကယ်ကို ရို တဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ… စာအုပ်နဲ့ရုပ်ရှင်အကြားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒီကားဟာ ဝေဖန်ခံခဲ့ရပေမယ့် ပရိသတ်အားပေးမှုကိုရရှိထားပြီး Box Office မှာ အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိထားတဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်…
Arendelle နိုင်ငံက မင်းသမီးငယ်လေး Anna ဟာ သူ့အစ်မ Elsa ကို ညဘက်ကစားဖို့ သွားနှိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသမီး Elsa မှာ ထူးဆန်းတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ နှင်းတွေ၊ ရေခဲတွေကို လိုသလိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ Elsa ဟာ သူ့ညီမလေးကို မတော်တဆ ရိုက်မိသွားပါတယ်။ Elsa မှာ ရှိနေတဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်း ဘယ်သူမှမသိအောင် မိဘတွေက ဖုံးကွယ်ထားပြီး Elsa ရဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်း Anna ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲက ပျောက်သွားအောင်Troll ခေါင်းဆောင်
ကြီး Grand Pabbie ထံ သွားပြီး အကူအညီတောင်းရပါတယ်။ အကယ်၍ Elsa သာ Anna ရဲ့ နှလုံးသားနေရာကို ရိုက်မိသွားရင် နှလုံးခဲပြီး သေသွားနိုင်တယ်လို့ Grand Pabbie က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ မိဘတွေဟာ Elsa နဲ့ Anna ကို သပ်သပ်ဆီခွဲထားလိုက်ပါတယ်။ကံကြမ္မာဆိုးတွေဆိုတာ ဒီလိုနဲ့ ရပ်မနေပါဘူး။ သူတို့လေးတွေ အရွယ်မရောက်ခင်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ မိဘတွေဟာ ပင်လယ်ထဲမှာ မုန်တိုင်းမိပြီး ဆုံးပါးသွားကြပါတယ်။ သူတို့မိဘ
တွေ ဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက် ၃နှစ်အကြာမှာ အရွယ်ရောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ Elsa ကို Arendelle နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်မအဖြစ် ဘိသက်သွန်းဖို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။ အဓိက စီစဉ်သူကတော့ Weselton နယ်စားကြီး ဖြစ်ပြီး Arendelle နိုင်ငံကနေ အကျိုးအမြတ်တွေ မျှော်ကိုးနေတဲ့သူပါ။ နန်းတော်ကြီးကို အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Anna တစ်ယောက် မြို့တော်ကြီးရဲ့ လမ်းတွေကြားထဲ လျှောက်သွားရင်း တောင်ပိုင်းကျွန်းတွေက မင်းသား Hans နဲ့ တွေ့သွားပါ
တယ်။ သူတို့နှစ်ဦး အဆင်ပြေပြီး Elsa ရဲ့ နန်းတက် ညစာစားပွဲမှာ Hans က Anna ကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Elsa က သူ့ညီမကို Hans နဲ့ သဘောမတူတာကြောင့် ညီအစ်မနှစ်ယောက် ပြဿနာဖြစ်ကြပြီး ဒေါသကြောင့် Elsa ရဲ့ စွမ်းအားတွေ ပေါ်သွားပါတယ်။
သူ့မိဘမှာခဲ့တဲ့ အမှာစကားကို ချိုးဖောက်ပြီး သူ့ရဲစွမ်းအားတွေကို လူကြားထဲမှာ ပြလိုက်မိတဲ့ Elsa ဟာ တုန်လှုပ်သွားပြီး ရှိရှိသမျှ စွမ်းအားတွေ အကုန်ထုတ်လွှတ်လိုက်မိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စွမ်းအားတွေကြောင့် Arendelle ဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး နှင်းတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ ထာဝရဆောင်းရာသီကို ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း မြောက်ဖက်က တောင်တန်းတွေပေါ်ကို ထွက်ပြေးသွားပြီး ရေခန်းနန်းတော်တစ်ခု ဖန်တီးနေထိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အစေအပါးတွေအဖြစ် နှင်းရုပ်တစ်
ရုပ်ကို ဖန်တီးထားလိုက်ပါတယ်။ Anna ကတော့ သူ့အစ်မဖြစ်သူကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ မြောက်ပိုင်းဒေသကို လိုက်လာပါတယ်။ လမ်းမှာ ရေခဲရောင်းတဲ့ Kristoff နဲ့ သူ့ရဲ့ သမင်ကြီး Sven တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဝံပုလွေအုပ်လက်က လွတ်အောင် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ Anna ဟာ Elsa ဖန်တီးထားတဲ့ နှင်းရုပ်ကြီး Olaf နဲ့ တွေ့ပြီး Elsa ရဲ့ နန်းတော်ကို လိုက်သွားပါတယ်။Annaကရော သူ့အစ်မကို ပြန်ရှာတွေ့နိူင်ပမှာလား၊ သူ့အစ်မကရော တိုင်းပြည်ကို ပြန်လိုက်ပမှာလား၊ Aredelle နိူင်
ငံကရော တစ်နှင်းပတ်လုံး နှင်းတွေ လွမ်းမိုးနေတဲ့ ကျိန်စာက လွတ်နိူင်ပါ့မှာလား၊ Annaအတွက် ချစ်သူအစစ်ကရော ဘယ်သူဖြစ်နေမှာလဲဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်ရမဲ့ နာမည်ကျော်ကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်။ Disney ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်ပို့ဇာတ်ကောင်တွေ၊ လှလှပပ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ ချစ်စရာ ဇာတ်ကောင်တွေကို အားပြုပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating 7.5 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ Tomatometer 90% ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Movie Guide Facebook မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
ဒီတစ်ခါတော့ CM Fan တွေကို Netflix ကဟာသ ကားလေး တစ်ခု နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမယ့် ကြိုသတိပေးချင်တာကတော့18+ အဆင့် R- Rated အဆင့်ပါလိင်အင်္ဂါ ပုံတွေ အထင်းသား ပြထားတဲ့အပြင်
သွေးထွက်သံယုံ အပြင်းစားတွေ နဲ့လူကြီး နဲ့ ကလေး အတူတူ မကြည့်သင့်တဲ့ဆဲဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ အများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ သူများ ၊ မိသားစု နဲ့ အတူကြည့်သော သူများကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်ပါ နှလုံးရောဂါရှိ
သူများ မကြည့်သင့်ပါဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ထောင့်မကျိုး အပျင်းထူ လူတွေနဲ့အစေးမကပ် တဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ အခန်းရှင်း ဝိတ်တာဘွိုင်း ၃ ယောက်နဲ့ဇတ်လမ်း စထားပါတယ်…သူတို့ ၃ ယောက်က မကောင်းတဲ့ အကျင့်တစ်မျိုးစီ ရှိပြီးဘာလုပ်လုပ် တလွဲတွေပဲ ဖြစ်နေပေမယ့် တူညီတဲ့အကြံတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ချမ်းသာချင်တဲ့ စိတ်ပါပဲ 😛တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ ဟိုတယ် ကိုVIP တစ်ယောက်လာတည်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲ ဟိုတယ်တစ်ခုလုံး တာဝန်တွေခွဲဝေ
ယူရရင်း အလုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီ VIP ကတော့ Online မှာ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးပေါက်ကရတွေ အကုန်လျှောက်လုပ်နေတဲ့လူမဲ သူဌေးလေး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ဘ၀ တစ်လျှောက်လိင်ဆက်ဆံတာ နဲ့ အပျော်ကြူးတာတွေ အတွက်ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး အားကျတဲ့Follower တွေ အများကြီးရထားတဲ့ နာမည်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်…ဝိတ်တာ ၃ ယောက်လဲ ထိုအကြောင်း သိထားတော့သူတို့ရေးထားတဲ့ ဂိမ်းပလန် ကို ပြပြီး ပရောဂျက်တောင်းဖို့ကြံစည်ကြတော့တာပါ
ပဲ…ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းချင်တော့ သူတို့ထက် အရင်အဲ့ဒီသူဌေးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ငွေညှစ်ဖို့ ကြံနေတဲ့အဖွဲ့ကဟိုတယ်ကို ရောက်နှင့်နေပါပြီ ဒီတော့ကာဘယ်လို သည်းထိတ်ရင်ဖို တလွဲတွေကြီးလုပ်ပြီးဟိုတယ် နဲ့ VIP ကို ကယ်မလဲဆိုတာရယ်မောရင်း ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုံး….ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့CM Translator ဖြစ်သူ Shain Htet Naing ဖြစ်ပါတယ်
mmbusticketInstant family ဇာတ်ကားဟာ IMDB 7.5 အထိရထားပြီး ဇာတ်အိမ်ဆန်းသစ်စွာနဲ့ ဟာသရသ မိသားစုချစ်ခြင်းဖွဲ့ရသ ကြည်နူးဖွယ်ရသနဲ့ စိတ်နှလုံးကို တိမ်းးညွှတ်အောင်ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ မွေးကင်းစကလေးကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် အရွယ်လွန်သွားပြီလို့ယူဆထားကြတဲ့ အကြင်လင်မယားတွေဟာ မိသားစုဘဝရဲ့အနှစ်သာရကို ကျန်ရှိနေတဲ့
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ခံစားခွင့်မရှိတော့ဘူးလား…. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိဘအရင်းတွေရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေကရော မေတ္တာအငွေ့အသက်တွေ လုံခြုံမှုတွေကို မရရှိနိုင်တော့ဘူးလား….. မိသားစုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ အင်မတန်ရိုးရှင်းပေမဲ့ သံယောဇဉ်တွေ နားလည်မှုတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေဆိုတဲ့ နက်နဲလှတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်က သေးငယ်တဲ့ကမ္ဘာလေးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး….. လူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်တစ်ဖက်တည်းက လက်ချောင်းတွေ အတိုအရှည်မညီကြသလို…. သွေးရင်းဖြစ်တဲ့ မိသားစုတွေတောင် နားလည်မှုအမြဲထားနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး….. ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖန်တီးတော့မယ့် သွေးမတော်သားမ
စပ်မိသားစုတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ တကယ်တန်းလက်တွေ့ကတော့ ထင်သလောက်မလွယ်လှဘူးလေ….. အကြင်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိမိတို့ရဲ့ကလေးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားချိန်ကစလို့ မိဘစိတ်ကို တဖြည်းဖြည်းမွေးမြူလို့ရပေမဲ့….. ရုတ်တရက်ရောက်လာမယ့် ကလေးတွေအပေါ်မှာရော ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြင် မိဘပီသတဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေ နားလည်မှုတွေ အပြည့်အဝထားရှိနိုင်ပါ့မလား…… ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးရဲ့ သံသယတွေကို ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ဖြေရှင်းပေးသွားမှာပါ….. ချစ်တာကလွဲပြီး ကျန်တာတွေကို နားမလည်နိုင်သေးတဲ့ မွေးစားမိဘနှစ်ပါးနဲ့…. မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကို စောင့်ရှောက်ရင်း….. သူ့ကို ချစ်တဲ့လူ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိဘူးလို့ ထင်နေတဲ့
ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်တို့ နားလည်မှုတည်ဆောက်ကြတာကို ကြည်နူးမှုနဲ့ ဝမ်းနည်းမှုရသမြောက်အောင် ရိုက်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ….. ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဂရုစိုက်မှုတွေပေးရုံနဲ့မိဘနေရာကို ခံယူလို့ရပေမယ့်…မိခင်အရင်းကိုသိပ်ချစ်တဲ့ ၁၅ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးရဲ့ မိဘအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရဖို့ဆိုတာတော့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး….. သူ့ဘဝကို လုံခြုံနွေးထွေးစေပြီး နားလည်မှုအပြည့်ပေးတဲ့ မိဘတွေကိုပဲ
ပိုပြီးမက်မောတတ်တဲ့ အရွယ်ပေါ့…… စမ်းသပ်ကာလတစ်ခုအထိ အတူနေပြီး တရားဝင်မိသားစုဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ ပိ(ထ်)နဲ့အယ်လ်တို့ဟာ လစ်ဇီ ၊ ဂွမ်နဲ့ လီတာတို့ရဲ့ မိဘအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမှုကို နောက်ဆုံးမှာ ရရှိသွားပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ အဖြေရှာရင်း လုံးဝကိုအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်ကားလေးလို့ပဲ ညွှန်းဆိုပါရစေ……
Jussi Adler-Olsen ရေးသားခဲ့တဲ့ The Purity of Vengeance: A Department Q ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် ဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီး ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတာပါ…. ကိုပန်ဟေဂန်မြို့မှာ ထူးဆန်းတဲ့(၃)လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်… လူသတ်သမားဟာ အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲမှာ လူသေအလောင်းတွေကို မံမီရုပ်အလောင်းဖြစ်အောင် စီမံထားပြီး စားပွဲဝိုင်း တစ်ခုမှာ နေရာချထားခဲ့တယ်… ထူးဆန်းတဲ့ ဒီအမှုကြောင့် ရဲတွေလည်း ခေါင်းမီးတောက်ကုန်တယ်… စုံထောက်တွေလည်း (၃)လောင်းတောင်ဆိုတော့ သဲလွန်စတွေ ရနိုင်သမျှာရှာဖွေကြတယ်.. ရရှိတဲ့ သဲလွန်စတွေအရ စုံထောက်တွေဟာ တရားခံနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ထင်သလောက်ရိုးရှင်းမနေသလို တခြား လျှို့ဝှက်ချက်တွေကပါ သူတို့ကို စောင့်ကြိုနေတယ်… ကိုင်း ဘာကြောင့်လူတွေသတ်တာလဲ…. လှည့်ကွက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ… လျှို့ဝှက်ချက်တွေကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲ.. စုံထောက်မှုခင်းကားကောင်းကြိုက်သူတို့အဖို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
mmbusticket The film isasequel to Tanu Weds Manu (2011), in which stars Kangana Ranaut (Tanu) and R. Madhavan (Manu) reprise their roles from the original. Tanu and Manu’s marriage collapses. What happens when Manu meets Tanu’s lookalike Kusum – and when Tanu returns? Kangana Ranaut also portrays the additional role ofaHaryanvi athlete Kusum in the film. Tanuနဲ့ Manu တို့ဟာ လက်ထပ်ပြီးလေးနှစ်ကြာတဲ့အထိ လန်ဒန်မှာနေကြပါတယ်။ Tanu ဟာ သူ့သူငယ်ချင်းကလေးမွေးလို့ ဇာတိပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Manu ကလည်း ကောလိပ်တစ်ခုမှာ ဆေးပညာမိန့်ခွန်းပြောဖို့ သွားတဲ့အခါ Tanu နဲ့ တူတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ အတူ Manu ဟာလည်း Tanu နဲ့တူတဲ့ Kussumနဲ့ လက်ထက်ဖို့ လုပ်တဲ့အခါ လက်ထက်ဖြစ်မလား။ Tanuကရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှု့ခံစားကြည့်ကြပါ။ အမျိုးအစားက Comedy, Romance ဖြစ်ပေမဲ့ IMdb Rating အမြင့်စားဖြစ်လို့ ကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
အကောင်းဆုံးထဲမပါပေမယ့် ၂ မိနစ်ခြားတစ်ခါ ရယ်ပြီး တစ်ကြိမ်ကို ၅၈ စက္ကန့် လောက်ရယ်ရ စေမယ် ဒီကားကြည့်နေရင်း စင်ကာပူကိုကျော်မည်နှင့် ထူးဆန်းသော မြေအောက်မြို့တော်ကြီး ဇာတ် လမ်းလိုခွီကနဲ ခွီကနဲ ဖြစ်သွားစေမယ့် ကားပါ။ “- လက်ဝှေ့ချန်ပီယံနဲ့ ဝူရှုးချန်ပီယံ ဖိုက်ရင် ဘယ်သူနိုင်မလဲ ” ဒီကားကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှစပြသခဲ့ပြီး တစ်ကားလုံးကို ၁၀၂ မိနစ်ကြာမြင့်ပါတယ်။ IMDb Rating 7.4 ၊ AsianWiKi 93 ရရှိထားပါ တယ်။ CJ Entertatinment ကထုတ်လုပ်ထား ုပြီး ကိုရီးယား ဘာသာစကားပြောရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Box office မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ mmbusticket အကောင်းဆုံးထဲမပါပေမယ့် ၂ မိနစ်ခြားတစ်ခါ ရယ်ပြီး တစ်ကြိမ်ကို ၅၈ စက္ကန့် လောက်ရယ်ရ စေမယ် ဒီကားကြည့်နေရင်း စင်ကာပူကိုကျော်မည်နှင့် ထူးဆန်းသော မြေအောက်မြို့တော်ကြီး ဇာတ် လမ်းလိုခွီကနဲ ခွီကနဲ ဖြစ်သွားစေမယ့် ကားပါ။ “- လက်ဝှေ့ချန်ပီယံနဲ့ ဝူရှုးချန်ပီယံ ဖိုက်ရင် ဘယ်သူနိုင်မလဲ ” ဒီကားကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှစပြသခဲ့ပြီး တစ်ကားလုံးကို ၁၀၂ မိနစ်ကြာမြင့်ပါတယ်။ IMDb Rating 7.4 ၊ AsianWiKi 93 ရရှိထားပါ တယ်။ CJ Entertatinment ကထုတ်လုပ်ထား ုပြီး ကိုရီးယား ဘာသာစကားပြောရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Box office မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားစတင်ပြသတဲ့ အပတ်မှာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ကားအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒီကားမှာ ဆုတွေရထားတာတော့မတွေ့ ရှိပါဘူး။ ဒီဇာတ်လမ်း ရဲ့ script က တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ script ကောင်းလို့ ကြည့်ရတာ ပိုပြီးအရသာရှိသွားတာပါ။ sex အသားပေးဟာသ ၊ လူငယ်တွေဘဲနားလည် နိုင်တဲ့ ဟာသ၊ စူပါဟီးရိုးတွေ ကို သောက်တစ်လွဲ ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဟာသ ၊အချစ်ဟာသ ဒီလို ဟာသတွေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ မိသားစုလိုက် လူကြီး တွေနဲ့ ပါကြည့်လို့ရတဲ့ ဟာသကားမျိုးပါ။ မကျေနပ်သေးရင် ဘုန်းကြီး တွေ နဲ့ ပါတူတူကြည့်လို့ရပါတယ်။ ရိုင်းတဲ့ ဟာသမပါဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။ နောက်တစ်ခုက ရိုင်းမှရယ်ရတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ sex comedy တော်လှန်ရေးထဲမှာ ဒီ ဟာသကားလဲ ပါပါတယ်။ Hangover ဇာတ် လမ်းတွေ နဲ့ ကျောရိုးခြင်းတူပါတယ် ဟာသဇာတ် ကွက် ကို ဇာတ်လမ်းသွားတဲ့ ထဲမှာဘဲ လုပ်ပြ သွားပြီး ထိထိမိမိရယ်ရပါတယ်။ Hangover တို့ American Pie တို့ ပြီးရင် ကြည့်သင့်တယ်လိုထင်ပါတယ်။ကြောင်တောင် တောင် စရိုက်တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ဇာတ်ဆောင်တွေ အပြင် ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေ ရဲ့ အသက်ဝင်မှု တေ ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုလေးတစ်မျိုးရှိနေပါ တယ်။ မင်းသားက က အဓိက ပါဘဲ ဒီဇာတ်ကားတစ်ခု လုံးမှာ သူ့နေရာက ကဇာတ်လမ်းထဲမှာ အခရာ ဖြစ်နေပြီး သူ့ ဇာတ်ကောင်ကလဲ စာအုပ်ကြီး ဝါ ဂေါက်သီး ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ကားလုံးမှာ သူရယ်တာ တစ်နေရာမှမတွေ့ ပါဘူး။ကြည့်တဲ့သူဘဲရယ်သွားရပါတယ်။ ဒီလို ဂေါက်သီး ပုံနဲ့ ဇာတ်ကောင်ကြောင့် ဟာသက ပိုပြီးထိမီသွားပါတယ်။ ဒီကားက ဟာသ ဆိုပေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက နားခါးတဲ့ အမှန်တရားကို သိအောင် ထုတ်ပြပေး ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ နေရာ တွေကို သရောပြီး ထောက်ပြထားပါသေးတယ်။ မှန်တာပြောရင် ရွှာပြင်ထုတ်ခံရ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်မှန်ကြီး ဖြစ်လွန်းနေတာကလဲ ၂၁ ရာစု အပြစ်ကြီး ဆိုတာကို မင်းသားဇာတ် ကောင်နေရာကနေ ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာအကောင်းဆုံး က ဇာတ်ညွှန်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ဟာသဇာတ်ကွက်တွေကို လုပ်ထားတာ တမင် ဟာက ဇာတ်ကွက်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းအတိုင်းဘဲ လုပ်ပြသွားပါတယ်။ ပြောချင်တာကအနှစ်သာရရှိတဲ့ ဟာသဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ။ တစ်ချို့ အနောက်တိုင်း ဟာသတွေ ကတော်တော် ကြည့်လို့ကောင်းပေမယ့် ဟာသဖြစ်အောင် မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဇာတ်ကွက်ကြီး တွေ ကောင်းကင် ပေါ်သေနတ်ထောင်ပစ်လိုက်ရင် စန်တာ ကလော့ ဘိုးဘိုးကြီး ထိပြီး ပြုတ်ကျလာတို့ လို over ဆန် တဲ့ ဟာကွက်တွေ မဟုတ်ဘဲ သူဘာများ ထပ်လုပ်ဦးမှာပါလိမ့် ဆိုပြီး မြင့်မြတ်အကယ်ဒမီ အထိမ်းအမှတ် ဆော်လေး သူ့ပိုင့်လယ်ကွက် လေးကို Live လွှင့်ဂုဏ်ပြုတာကိုကြည့်သလို ဇာတ်ရှိန်က ကြာလေမြင့်လာလေပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် နောက် ဆုံးမှာသူ့လိုတော့ ဂျင်းမထည့်ပါဘူး။ ကိုရီးယား ဟာသ အများစုက ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ရောက်လေ ဒရာမာ ချိုးလေ လုပ်တက်ပါတယ် ဒီကားမှာလဲ နောက်ဆုံး ပိုင်းလောက်မှာဒရာမာ နည်းနည်းဖြစ်ချင်ပေမယ့် ဇာတ်မအေးသွားပါဘူး။ သူ့ပုံစံက ဇာတ်လဲသိမ်း ဟာသလဲ သိမ်း နောက်ဆုံးအထိဟာသ ဇာတ်ကွက်ကို ထည့်ထား ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်း က လက်ရှိလောက(အစိုးရဌာန) မှာဖြစ်နေတဲ့အထက်လူကြီး နဲ့အောက်ပိုင်းက လူတွေ ကြားက ဆက်ဆံရေးတွေ ၊ အထက်ပိုင်း ရောက်ရင် အချိုးပြောင်းပြီး ဖော်ရှိုးမုန့် တို့ ရှီုရှောင် အချိုရည်တို့ကို သိပ်ကြိုက်ပြီး ဒီကအခေါ်ဝေါ်အရဆို ကွီးတို့ ဘဘတို့ လို ကိုယ်တော်ကြီး ကိုယ်တော်လေးတွေ ရဲ့ မကောင်းကွက်ကို ဦးတည်ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒါတွေဟာသအနေနဲ့ ရိုက်ထားပြီး ကို နရင်းကို လက်ဖျားနဲ့ အုပ်သလိုခပ်ပါးပါးလေးပုတ်ထားပါတယ်။ ဒီကားကြည့်နေ ရင် ဝင်လာတဲ့အတွေးက ရိုးသားရင် စံမဟုတ်ဘူး ခံဆိုတဲ့ သဘာ၀ ပါဘဲလား။ မရိုးသားနဲ့ လို့ ဆို လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်ဘူး ဆိုရင် လိမ်သင့်လိမ်ရမယ် အဲ့လိုဆိုလိုချင်တာပါ။ ဟာသကကောင်းကောင်းလေးတွေ ကို စနေနေ့ အလုပ်ပိတ်တဲ့ သူတွေ ဆို Friday မှာညမှာ ကြည့်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါဘဲ။ ဘာလို့ဆို တစ်ပတ်လုံး ပင်ပန်းလာသမျှ အလုပ်ကပြန်ရင် မနက်ဖြန်အလုပ်ပိတ်ပြီ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်အသိ ရှိနေတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခြားနေ့တွေ ထပ် လွတ်လပ်မှုကို ရရှိနေပါမယ်။ နောက် သွားစရာ လာစရာတွေ ရှိရင်လဲ စနေနေ့ သို့ တနင်္ဂနွေ ကို ရွှေးချယ်ကြတာများတာမို့ Friday ညကမှာလုပ် စရာ သိပ်မရှိတက်ဘဲ ငါဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေ တက်တာမို့ အဲ့လို အချိန်မျိုးမှာ ဟာသကားကြည့် ရတာ သြင်္ကန် မဖလန်းရဘဲ တရားစခန်းဝင်ပြီး ုပြန် ထွက်လာရသလိုခံစားချက်လို နေတိုင်းရှုနေကြ လေတောင် အရသာရှိသွားတဲ့ ခံစားချက် မျိုးပါ ။ ပင်ပန်းလာသမျှ ကို ဇာတ်လမ်းနဲ့ ရောပြီ ရယ်ချပလိုက်ရင် စိတ်လဲပေါ့ပါး သွားပါတယ်။ပြီးတော့ဇာတ်ကားတွေ ကိုကြည့်ရင် ညဘက် ကြည့်တာ ဇာတ်လမ်းကို ပိုခံစားမိစေပြီး ဇာတ်လမ်းက ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေမှာပါ။
ဒွန်ဝဲလေ့စ်ဟာ ကျောင်းသားသစ်အနေနဲ့Slaughterhouseကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ် ကျောင်းဟာစာပဲသင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိနေကျစာသင်ကျောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး အသက်ရှင်ကျန်နေဖို့သင်ထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုသင်ပေးတဲ့ကျောင်းပါ အနိုင်ကျင့်တာတွေကကျောင်းသားတွေသတ်သေတာမျိုးအထိပါဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ် ကျောင်းအုပ်ကပိုက်ဆံကလွဲပြီးအခြားအရာတွေကိုသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ပေမယ့် အများအမြင်မှာတော့စည်းကမ်းကြီးတဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ သူ့ကိုယ်သူဖုံးထားပါတယ် ကျောင်းဝင်အတွင်းရဲ့ အောက်ခြေမှာရှိတဲ့မီသိန်းဓာတ်ငွေ့သိုက်ကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆီရောင်းစားလိုက်ပြီး စိတ်ကြိုက်လုပ်ခိုင်းပါတော့တယ် မီသိန်းယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပြီးမြို့ပြင်ရောက်နေတဲ့စာသင်ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုမျိုးူပြသနာတွေနဲ့ဒွန်တစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ မကြာသေးခင်ကမှnetflixကထွက်ရှိထားတဲ့sex educationရဲ့ဇာတ်ကောင်အိုတစ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Asa Butterfieldကို မတူညီတဲ့ကျောင်းသားပုံစံနဲ့လည်းမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
Oggy and the Cockroaches The Movie (2013)
ဒီကာတွန်းကားလေးကတော့ Oggy နဲ့ ပိုးဟပ်များ ဆိုတဲ့ကာတွန်းစီးရီး ရဲ့ 2013 က ထွက်ရှိထားတဲ့ The Movie ပါOggy ဆိုတာ ဘာနဲ့ သွားတူလဲဆိုတော့ ကြောင် နဲ့ ကြွက် လိုပါပဲတစ်ခု ထူးခြားတာကတော့ Copy ထားတယ်လို့ မခံစားရပဲ တကယ်ကို အူလိုက် သည်းလိုက် ကို ရယ်ရပါတယ်ဇတ်လမ်းဇတ်ကွက်ကလဲ အပြောင်အလှော် တွေနဲ့မထစတမ်း ကြည့်ချင်လောက်ပါတယ်…Oggy က ဉာဏ်ကောင်းပြီး ရိုးသားတဲ့ ကြောင်သူ့အကို ခပ်တုံးတုံးခပ်အအ တစ်ကောင်လဲ ရှိတယ်သူတို့ ညီအကို ကို ဒုက္ခမတရားပေးတဲ့ ပိုးဟပ် ညီအကို၃ ကောင်လဲ ရှိတယ် အကုန် တလွဲတွေ လုပ်ပြီးကြောင်တွေကို ဒုက္ခမပေးရင် စားမဝင် အိပ်မပျော်တဲ့တကယ့် ငပြောင်တွေပေါ့…ဒီကာတွန်း ရုပ်ရှင်ကို စာတမ်းထိုးပေးချင်ပေမဲ့ဘာစကားမှ မပြောတဲ့ အတွက် ဘာစာမှ မထိုးပေးထားပါဘူးCM က ပထမ ဆုံးအကြိမ် မြန်မာစာတန်း မထိုးပဲ တင်ပေးတဲ့Animation ရုပ်ရှင်ပါပဲ 😀ဒီရုပ်ရှင်မှာ အပိုင်း ၄ ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်…၁။ ကမ္ဘာဦးခေတ် မီးကို ရှာဖွေတဲ့ အပိုင်း၂။ ဘုရင့်သားတော်လေး ရဲ့ ကြင်ယာတော် ကယ်တင်ခန်း၃။ ရှားလော့ဟုမ်း နဲ့ ဒေါက်တာဝပ်ဆန် ရဲ့ သော့ရှာပုံတော်၄။ အာကာသ စတားဝါး စစ်ပွဲကဲ နာမည်လေးတွေ သိရပြီဆိုတော့အိမ်က ကလေးတွေကိုပဲ ပြပြကိုယ်တိုင်ပဲ မိသားစု နဲ့ ကြည့်ကြည့်ခွီနိုင်ပါပြီ….
2014 မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ ထိုင်းသရဲကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်..3AM ထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ကားအပိုင်း 3ခုထဲကတစ်ခုရဲ့ အဆက်အဖြစ် ဆက်လက်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..3AM ထဲမှာ အချိန်ပိုဆင်းတဲ့ ရည်းစား၂ယောက်ကို သရဲအဖြစ်ခြောက်လှန့်ပြီးတော့ စနောက်တဲ့ သူ2ယောက်အကြောင့် ထွက်ပြေးသွားကြရတဲ့ရည်းစား၂ဦးလုံး လှေကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသွားပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်..အဲ့ဇာတ်ကားကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်..အခုဒီဇာတ်ကားရဲ့အစမှာလည်း ထိုဇာတ်ကားကအပိုင်းအစ လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြထားပေးပါတယ်..Ghost Over Time ဇာတ်ကားမှာတော့အစအနောက်သန်တဲ့ လူတစ်စုနဲ့အတူသရဲအယောင်ဆောင်တာတွေမှာ..တကယ့်သရဲအစစ်ပါလာတဲ့အခါဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ကြရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါ
2013 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အချစ်ဟာသ ဖန်စီ ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားကိုတော့ CM ပရိတ်သတ်ကြီးအနေနဲ့ သိပ်စိမ်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဘာလို့ဆို သူ့ကားတွေကြီးပဲ တင်ဆက်ပေးလာလို့ပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အချစ်ဦးဆိုတာ ဘယ်လောက်ပင်ကြာကြာ မမေ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ငယ်စဉ်ကထဲက ကစားအတူသွားအတူ နေခဲ့ကြတဲ့ သူတွေ ချစ်ကြပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘယ်လောက်တောင်ချစ်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ပြောနေစရာမလိုလောက်တော့ဘူးထင်ပါတယ် ဒီကားလေးထဲမှာတော့ ငယ်စဉ်ကထဲကခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းနှ်စ်ယောက်တစ်ယောက်က တိတ်တခိုးလေးချစ်မိနေတဲ့အခါမှာ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကမသိပဲ လျှောက်ပွေးဒါကို ဖွင့်မပြောရဲတော့ ကြိတ်ခံစား နေရင်း အခွင့်အရေးရတဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ …………………ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ တိတ်တခိုးချစ်ပြီး ကြိတ်ပိုးနေရင်တော့ ရဲရဲသာဖွင့်ပြောလိုက်ပါနော်ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်တာဟာ အပြစ်မဟုတ်သလိုကောင်မလေးတစ်ယောက်ကလဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိနေတာက အပြစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးချစ်မိနေရင်တော့ Gender တွေကိုဘေးချိတ်ပြီး ရဲရဲသာဖွင့်ပြောလိုက်ပါကောင်မလေးဆိုလဲ ကြောက်မနေပဲ ရဲရဲသာကို ကြိတ်ခွက်နေတဲ့ကောင်လေးကို သွားဖွင့်ပြောလိုက်ပါနော့သူလဲ ကိုယ့်ကြိတ်ခွက်ရင် ခွက်နေမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်မလား ဘာမှ ဂရုစိုက်မနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ တကယ်တော့ထင်သလောက်ကြီး သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး neglect လုပ်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါ :p ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ Patricia နဲ့ Ivan သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကောင်မလေးဖြစ်သူ Patricia ကသူ့သူငယ်ချင်း ကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ သူ့သူငယ်ချင်း ကောင်လေး Ivan ကခံစားလို့မရပဲ ချေထားခဲ့ပါတယ်ကဲ Patricia တစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အချစ်ကို ရဖို့ မိန်းကလေးတန်မဲ့ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားမလဲဘယ်လို အလွဲတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက် ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးရင် ကောင်မလေးတွေ ရှက်မနေနဲ့ ရဲရဲ သာဖွင့်ပြောလိုက် တော့ ဗျ 😛
>>> Do not watch with Family due to sexual content<<<Rating လဲမကောင်း.. 18+ တွေလဲပါတဲ့ ဇာတ်ကားကို ဘာလို့တင်တာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်…
တစ်ခါတစ်လေမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေအပြင်လောကမှာကြုံဆုံနေတဲ့အခါမျိုးမှာ.. လက်တွေ့မှာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေ ညစ်တီးညစ်ပတ်စကားလုံးတွေ ခွတီးခွကျပေါက်ကရဖြစ်ရပ်တွေက အံ့သြသင့်ဖို့လဲကောင်းသလို ရီဖို့လဲကောင်းလွန်းတဲ့ ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးကြည့်ခြင်းက သင့်ဦးနှောက်ကို အသစ်အဆန်းတစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရာရောက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိလို့ပါ…ဒီဇာတ်ကားကို နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဒါရိုက်တာပေါင်းများစွာက ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလောက်ကြာအောင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲ… rating ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ (Rating- IMDb : 4.3/10 , RT:4 , Matacritis : 18%) ဖြစ်ပါတယ်…
အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲက Cast တွေအနေနဲ့ကတော့….…Kate Winslet , Emma Stone , Naomi Watts , Kate Bosworth , Chloe Grace Moretz , Helle Berry , Anna Faris (Scary Movie) , Elizabeth Banks , Uma Thurman , Kristen Bell , Leslie Bibb အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီး အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်တွေအပြင် Richard Gere , Gerard Butler , Hugh Jackman , Chris Pratt , Terrence Howard , Josh Duhamel , Dannis Quaid ,Gerg Kinner , Jeremy Allen , Stephen merchant , Christopher Mintz-Plasse , Justin Long , Kieran Culkin , Jason Sudeikis , Jimmy Bennet စတဲ့နာမည်ကြီး အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး ၊ ဒါရိုက်တာအနေနဲ့လည်း Steven Brill, Peter Farrelly, Elizabeth Banks စသည်တို့အပါအဝင် စုစုပေါင်းဒါရိုက်တာ 13ဦးရိုက်ကူးပြီး ဇာတ်ညွှန်းပိုင်းမှာလဲ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ အယောက် 20အထိပါဝင်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရာမှာ အစောကပြောခဲ့သလို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်ညွှန်းကိုထုတ်ဝေသူအများစုကငြင်းပယ်ခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကသရုပ်ဆောင်ရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ၊ ရိုက်လက်စသူအချို့ကလဲ ဆက်မရိုက်တော့ဘူးဆိုကာ ရိုက်ကူးရေးမှထွက်ချင်ခြင်း စတဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက် 2013 Junuary 25 မှာထွက်လာခဲ့တဲ့ Movie 43 ဟာ 34ကြိမ်မြောက် Golden Raspberry ဆုပေးပွဲမှာ Worst Picture, Worst Director, Worst Screenplay စတဲ့ဆုသုံးဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် one of the worst films of all time ရဲ့စာရင်းထဲကိုလဲဝင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ကြာမြင့်ချိန် 98 မိနစ်ရှိပြီး Indie / Comedy အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ရိုက်ကူးရေးအတွက် စုစုပေါင်းကန်ဒေါ်လာ6မီလီယံ ကုန်ကျခဲ့ပြီး Box office မှာ 32.4 မီလီယံဒေါ်လာထိပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ……
Calvin Culter နဲ့သူ့သူငယ်ချင်း JJ တို့ဟာ သူတို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ပေါကြောင်ကြောင် Video တစ်ခုကို Youtube မှာ တင်လိုက်ပြီး မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲ သူတို့ရဲ့ Video ဟာ 1,000,000 view ရသွားတဲ့အခါ အကြီးအကျယ်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့အပျော်ဟာကြာကြာမခံလိုက်ပါဘူး…ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ အဲ့ဒိ့viewer အများကြီးတိုးလာတာက Calvin ရဲ့ညီ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင် Baxter ရဲ့ April Fool’s Prank ဖြစ်နေလို့ပါ…အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားတဲ့ Calvin Culter နဲ့ JJတို့ဟာ Baxter ကိုပြန်ကလဲ့စားချေဖို့ကြံစည်ပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့အကြံအစည်က Baxter ရဲ့ laptop ထဲကို Virus တွေထည့်ဖို့ပါပဲ….. သူတို့လက်စားချေခြင်းရဲ့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Baxter ရဲ့ Laptop ကိုခိုးဖို့ပါ..အဲ့လိုခိုးဖို့အတွက် Baxter ကိုသူ့အခန်းထဲကနေအောင် Movie 43 အကြောင်းလုပ်ကြံပြီးပြောရာကနေပြီး ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လာခဲ့တာပါ….ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ချင်မိသွားတာက 24 Bad Movies You Forgot Starred Some of Today’s Greatest Actors ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကိုစဖတ်မိရကပါ။ အဲ့ဒိဆောင်းပါးမှာ moviefone က အဲ့ဒီရုပ်ရှင်အတွက် အားနာမိတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကို ဖော်ပြရမှာ “Kate Winslet & Everyone else” လို့ဖော်ပြခဲ့လို့ပါ။ Rating နည်းနည်းလေးပဲရထားပြီး နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာ စကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆက်ကြည့်ချင်သွားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်…. လက်တွေ့မှာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေ ညစ်တီးညစ်ပတ်စကားလုံးတွေ ခွတီးခွကျပေါက်ကရဖြစ်ရပ်တွေက အံ့သြသင့်ဖို့လဲကောင်းသလို ရီဖို့လဲကောင်းလွန်းပါတယ်။ (ကျနော်ဆို ကြည့်နေရင်းနဲ့ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်မိပါတယ်… သူ့ဇာတ်လမ်းတွေက အံ့သြသင့်စရာကောင်းလွန်းလို့ပါ)..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ဟာ ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီကားလေးကိုလက်လွတ်မခံပဲကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ….။
Moon lover ထဲက နံပါတ် ၈ မင်းသားလေး Kang Ha Neul ရဲ့ သူရဲကားလေးပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ကန်အင်ဆိုး ဆိုတဲ့ကောင်လေးက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက တစ္ဆေသူရဲတွေကို မြင်နိုင်တဲ့သူပါ။ သူက သတ္တိမရှိကြောက်တတ်တဲ့သူငယ်လေး ဆိုတော့ အမြဲကြောက်ရွံထိတ်လန့်နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ တစ္ဆေသူရဲတွေကတော့ သူတို့ မကျွတ်မလွတ်တာကို အကူအညီတောင်းဖို့လာကြပေမယ့် သူကကြောက်တတ်တော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်တတ်ပါတယ် ။တစ်နေ့မှာတော့ သူမြို့မှာ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်တဲ့အတွက် ငယ်ငယ်က သူနေခဲ့ဖူးတဲ့မြို့ကလေးမှာဦးလေးဖြစ်တဲ့သူနဲ့အတူ နေထိုင်ရအောင် ပြန်လာခဲ့ရင်း သူရဲမချောချောလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသူရဲမလေးကတော့ သူခါတိုင်းမြင်နေကျ သူရဲတွေနဲ့ မတူဘဲသူ့ကို ခင်ခင်မင်မင် မိတ်ဖွဲ့လာလို့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ရင်းကနေပဲ ခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သူတို့ကျောင်းလေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပျောက်သွားကြပါတယ်။ ကျောင်းထဲမှာ သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ ဆေးဟီးဆိုတဲ့ သူရဲတစ်ယောက်ရယ် CM ကမိုးမြင့်လွင်လို ဆံပင်အလွာလိုက်မျက်နှာဖုံးနေတဲ့ သူရဲမတစ်ကောင်ရယ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ “ ဆေးဟီး” ကတော့ ဒီကျောင်းမှာပဲ ကျောင်းသူကျောင်းသားအချင်းချင်း မတရားအနိုင်ကျင့်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတဲ့ သူရဲတစ်ယောက်ပါ။ ဒီမျက်နှာဖုံး နဲ့ သူရဲဟာ တဖြည်းဖြည်း စွမ်းအားထက်လာပြီး သူ့ကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့သူတွေကို တခြားလူတစ်ယောက်ကို ဝင်ပူးရင်းနဲ့ လိုက်ပြီးလက်စားချေနေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ကန်အင်ဆိုး တစ်ယောက် မျက်နှာဖုံးနဲ့ သူရဲက သူခင်မင်နေတဲ့ သူရဲမချောချောလေး မှန်း သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘာလို့ ဆေးဟီးက ဒီလိုတွေ လုပ်နေရတာလဲ။ဘာလို့ သူရဲမလေးက စိတ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေတာလဲသူ ခင်မင်နေရတဲ့ ဆေးဟီးလေး လွတ်ကျွတ်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲ ဆိုတာကို ရင်ခုန်လှုပ်ရှား စွာနဲ့ ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်ဒီကားလေးကြည့်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ခင်မင်မှုနဲ အားပေးမှုက ဘယ်လောက် အရေးပါတယ်ဆိုတာ သိမြင်နိုင်ပါတယ်..သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အားပေးကူညီမှုဟာ လူတစ်ယောက်အတွက်ရော တစ္ဆေသူရဲတွေအတွက်ပါ အရေးပါသလို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့လျစ်လျူရှုမှုဟာလည်း လူတစ်ယောက်ကို လမ်းဆုံးတွန်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကြောက်တရားကြောင့် သူငယ်ချင်းကို မပစ်ပယ်သင့်သလို အကြောက်တရားကို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အားပေးကူညီမှုကသာကျော်လွားနိုင်တာကိုသိမြင်နိုင်မှာပါ။
CM ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းကိုမှ နှစ်ခြိုက်ပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲအားပေးနေတဲ့သူတွေရှိလား…ဒီတခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းကတော့ ပျင်းလဲမပျင်းရဘူး ရယ်နေရမယ် ငိုရမယ့်ဇာတ်ဝင်ခန်းလဲပါမယ်.. စိတ်ဝင်စားဖို့လဲကောင်းမယ် ဒီဇာတ်လမ်းကို Chinese က Remake ပြန်လုပ်ထားတဲ့ version တောင်ရှိပါတယ်…ကဲ စိတ်ဝင်စားသွားကြပြီထင်ပါတယ်.. ဇာတ်လမ်းနာမည်ကတော့ “Miss Granny”တဲ့..အညွှန်းလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး..အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ် အဖွား အိုမယ်ဆွန်းဟာ တစ်ကိုယ်တည်း ရပ်တည်ပြီးသားဖြစ်သူကို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သူပါ..သူဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ် ကံဆိုးချင်တော့ သူချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းဟာလဲ စစ်တိုက်ရင်း စစ်ပွဲကျကာ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ မုဆိုးမ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်…ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အားကိုးမယ့်သူမရှိ ငွေကြေးကလဲအဆင်မပြေ အသက်ကလဲငယ်သေးတော့ မယ်ဆွန်းအတွက် ဘဝဟာခက်ခဲပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်..သူ့ရဲ့ ငယ်ရွယ်မှုတွေ ဝါသနာတွေကို သားလေးအတွက် မြှုပ်နှံပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်…သူ့ရဲ့ သားလေးအပေါ်သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေက အချည်းနှီးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး..သားဖြစ်သူဟာ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်ကျကာ သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်..မယ်ဆွန်းဟာ အဖိုးကြီးအဖွားကြီးထုံးစံအတိုင်း ချွေးမဖြစ်သူကို နေ့စဉ်ပွစိပွစိ ပြောတတ်ပါတယ်..ချွေးမဖြစ်သူဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူတော့မဟုတ်ပါဘူး ယောက္ခမ ပူညံသံကတစ်မျိုး ကျန်းမာရေးက တမျိုးနဲ့ တစ်နေ့အိပ်ရာထဲလဲပါတော့တယ်..ယောက္ခမ ကြောင့်စိတ်ဖိစီးနေတဲ့ ချွေးမဟာ မယ်ဆွန်းအဖွားကြီးကို မတွေ့ချင်တော့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..ဒါကိုသိတဲ့ အဖွားမယ်ဆွန်းဟာ သူ့သားဖွင့်ပေးထားတဲ့ ကဖေးဆိုင်မှာသာ သွားနေပါတော့တယ်…တစ်နေ့ မယ်ဆွန်းဟာ ချုံချွန်းဓာတ်ပုံစတူဒီယိုဆိုပြီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်..ဓာတ်ပုံဆိုင်က ထွက်လာချိန်မှာတော့ သူဟာ အသက် ၂၀ ၂၁ အရွယ် မိန်းမပျိုလေးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်…ဒီနောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ CM ပရိတ်သတ်တွေကပဲ ကြည့်ရှုခံစားကြပါဦး..
Little Miss Sinshin (2006)
ittle Miss Sunshine(2006)IMDb…7.8,,,,Rotten….91%ဒီကားက ဇာတ်ပို့နဲ့ ဇာတ်ညွှန်းအော်စကာဆုတွေရရှိခဲ့တဲ့ကားပါ…ဟာသကားတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအဖို့ Steve Carell ကိုနာမည်သာမမှတ်မိတာ လူမြင်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီဘိုးတော်ကားတွေကရယ်လည်းရယ်ရသလို တွေးစရာ မှတ်သားစရာလေးတွေပေးပြီးရင်ထဲကျန်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ တွေးစေနိုင်လောက်သည့်အထိ သူ့ကားတွေတော်တော်များများက ကောင်းခဲ့တာပါ….IMDb တွေ Rotten တွေကလည်း ကြွရွလို့…ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်..သူက မိုင် (၈၀၀)လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာ အလှမယ်ပြိုင်ဖို့ရှိတယ်…အဘိုး၊ဦးလေး ၊အမေနဲ့အမေတို့က ဆင်းရဲလေတော့ ကားစုတ်လေးငှားပြီးသွားကြတယ်..လမ်းမှာ ဒုက္ခမျိုးစုံတွေကြသလို ..အလွဲလွဲအချောချောပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့…တွေးစရာမှတ်သားစရာလေးတွေ ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာတော့
Let the Bullet Fly (2010) ရုပ်ရှင်ဟာ ၂၀၁၀ခုနှစ်ကစတင်ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့တရုတ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် IMDB အနေနဲ့7.3/10 ကိုရယူထားပြီး Rotten Tomato မှာတော့ 72%ပါ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေအဖြစ်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Chow Yun-fat(ချောင်ယွန်ဖတ်) Jiang Wen(ကျန်းဝမ်)တိုပါဝင်သရုပ်ဆောင်အားပြိုင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းကြာချိန်ကတော့ ၂ နာရီပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၂၀ပြည့်နှစ်အချိန်ကာလတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျာက်ပေါက်မာဓားပြကျန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ဓားပြအဖွဲ့ရှိခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့အရာရှိမင်းမာပန်းတယ်စီးနင်းလိုက်ပါလာသောရထားအားလုယက်မှုပြုရင်း ဓားပြဗိုလ်မှအရာရှိယောင်ဆောင်ကာအနီးနားရှိအယ်ချန်မြို့လေးသို့သွားရောက်ကာမြို့ဝန်မင်းရာထူးရယူပြီးကြီးပွားချမ်းသာဖို့ကြံစည်ပါတယ် သို့သော်ထိုမြို့တွင်ကြီးစိုးနေသော သူဌေးဟွမ်စစ်လန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ် သူတို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန် အကောက်ဉာဏ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရင်း ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်လာမလဲ ဘယ်သူရှုံးနိမ့်ပြီးဘယ်သူနိုင်သွားမလဲဆိုတာ…….. အက်ရှင် ဟာသ ဒရာမာပေါင်းစပ်ထားသောဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက လူသားမျိုးနွယ်နဲ့ တောင်ပံလူသားမျိုးနွယ်တို့ စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအငြိုးအတေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပံလူသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ ကြယ်ကြွေပန်းကို ဆုံးရှူံးခဲ့ရပြီး မပျံသန်းနိုင်တော့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် တောင်ပံလူသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရွှယ်လျဲ့ဟာနာကြည်းမုန်တီးမှုရန်ငြိုးတွေကြောင့်ငါးမန်းပုလဲကို ရယူပြီး လူသားတွေရဲ့ ကမ္ဘာကို ပျက်စီးအောင် ကြိုးစားပါတော့တယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ဓားပြကြီးနီခုံးခုံး၊ မိန်းမလှလေးတောင်ပံမည်းနဲ့ ဘုရင့်သားတော်ဟော့လိတို့စုပေါင်းပြီးတားဆီးရွယ်လျဲ့ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားကြမှာပါ။ ဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကိုတော့ပရိသတ်တွေရင်သတ်ရှုမောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ရသအနေနဲ့ကတော့ဓားပြကြီးနီခုံးခုံးနဲ့ မိန်းမလှလေးတောင်ပံမည်းတို့ရဲ့ မေတ္တာရေးဇာတ်လမ်းကိုလည်းရိုမတ်တစ်ဆန်ဆန်လေးခံစားကြရမှာပါ။သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကဘယ်လိုတွေတောင်ပြင်းထန်သွားမလဲ ဆိုတဲ့Action တွေ အချစ်ရေးဖြစ်တဲ့ Drama တွေကကောဘယ်လိုတွေရင်ခုန်မျှော်လင့်ကြရမလဲဆိုတာကတော့……
မနက်ကမှအော်စကာရသွားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ 1962ခုနှစ်ဆိုတာလူမည်းတွေအတွက်တော့အရမ်းကောင်းတဲ့ခေတ်မဟုတ်ပါဘူး ဘတ်စ်ကားကအစ၊အိမ်သာကအဆုံးခွဲခြားဆက်ဆံတာခံနေရတဲ့အချိန်မှာ အီတာလီလျံဖြစ်တဲ့တိုနီလစ်နဲ့လူမည်းစန္ဒယားပညာရှင်ဒွန်တို့ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအဖြစ်တွေ့ကြရပါတော့တယ် ဒွန်ဟာလူမည်းဖြစ်ပေမယ့်လူဖြူစရိုက်အပြည့်နဲ့ဖြစ်ပြီး တိုနီဟာလည်းလူဖြူဖြစ်နေပေမယ့်လူမည်းစရိုက်နဲ့ဘဲဆိုးကြီးပါ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကတော့ဒွန်ရဲ့နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲကို တိုနီကကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် စရိုက်ချင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အရောင်မတူတဲ့လူ၂ယောက်ဟာ ခရစ်စ်မတ်မတိုင်ခင်အမှီအိမ်ပြန်ရောက်ပါတော့မလားဆိုတာကိုတော့ အခုပဲဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးကြည့်လို့ရပါပြီ
မင်းသားရှာရွတ်ခန်းနဲ့ မင်း သမီး အနွတ်ရှ်ကာရှားမားတို့က ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် ပူးတွဲသရုပ်ဆောင်တဲ့ တတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်သလို ပါရာဂွေး၊ အမ်စတာဒမ်၊ ဗီယင်နာ၊ လစ္စ ဘွန်းနဲ့ ဘူဒါပက်စ်က ရှုခင်းအလှ အပတွေကိုပါ ခံစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ဟာရင်ဒါဟယ်ရီဆင်းန်နီ ဟာရာဟာ အမ်စတာဒမ်က ဧည့် လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စန်းပွင့်သူ ဖြစ်သလို ခင်မင်တတ်၊ ကူညီတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူဂိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဂူဂျာရာတီမိသားစု ကို လေဆိပ်လိုက်ပို့အပြီးမှာတော့ ပြဿနာလေးတစ်ခု စပါတော့ တယ်။ဂူဂျာရာတီ မိသားစုဝင်တစ် ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆီဂျယ်ဇာဗာရီ ဟာ ခရီးစဉ်မှာ သူ့ရဲ့စေ့စပ်လက် စွပ်ပျောက်သွားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်စွပ်ပြန်ရှာချင်တဲ့ ဆီဂျယ်ကို ဟယ်ရီက ကူညီပေးဖို့ အင်တင် တင်ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း အတူ လိုက်ရှာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟယ်ရီဟာဂူဂျာရာတီ မိသားစုကို လိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ နေရာ တွေအကုန်လုံးကို ဆီဂျယ်နဲ့အတူ ပြန်သွားပြီး လက်စွပ်လိုက်ရှာခဲ့ ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုသွားရင်းနဲ့ ဟယ်ရီဟာ ဆီဂျယ်ကို စိတ်ဝင် စားခဲ့ပေမယ့် စေ့စပ်လက်စွပ်ရှိ နေတာမို့ ပိုင်ရှင်ရှိနေတယ်ဆိုပြီး ဖွင့်မပြောခဲ့ပါဘူး။နောက်တော့ လက်စွပ်ကို ဂက်စ်ဆိုတဲ့ လူဆိုးတစ်ယောက် က ခိုးယူသွားတယ်လို့ ယူဆပြီး ဂက်စ်ဆီမှာ လက်စွပ်ပြန်တောင်း ရင်း လူဆိုးအဖွဲ့တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဟယ်ရီဒဏ် ရာရသွားတဲ့အတွက် ဆီဂျယ်က သူ့အိတ်ထဲကဆေး သွားယူရင်း လက်စွပ်က အိတ်ထဲမှာရှိနေတာ တွေ့ခဲ့ပြီး ဟယ်ရီကိုတော့ လက် စွပ်ပြန်တွေ့တဲ့အကြောင်း မပြော ခဲ့ပါဘူး။နောက်ရက်မှာတော့ ဖရန့်စ် ဖတ်မှာလုပ်မယ့် ဟယ်ရီ့သူငယ် ချင်း မင်္ဂလာဆောင်ကို ဟယ်ရီနဲ့ ဆီဂျယ်အတူ သွားခဲ့ကြပြီး မင်္ဂလာပွဲအပြီးမှာ အချေအတင်တစ်ခုဖြစ် ကြကာ ဆီဂျယ်အိန္ဒိယကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ လေဆိပ်ကိုရောက် တော့မှ ဆီဂျယ်က သူ့လက်စွပ်က အိတ်ထဲမှာ အထားမှားပြီး ပျောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ဟယ်ရီကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဆီဂျယ်လည်း အိန္ဒိယကို ပြန်သွားပြီး ဟယ်ရီလည်း သူ့အလုပ်သူ ပြန်လုပ်နေပေမယ့် ဆီဂျယ်ကို မေတ္တာရှိနေတာ ကြောင့် တစ်ချိန်လုံး သတိရနေ သလို ဆီဂျယ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲသွား မယ်ဆိုပြီး ဟယ်ရီတစ်ယောက် အိန္ဒိယကို လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆီဂျယ်က အိန္ဒိယမှာ တကယ်ကော မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ် ရဲ့လား။ ဟယ်ရီကကော ဆီဂျယ် အပေါ် မေတ္တာရှိနေတဲ့အကြောင်း ပြောဖို့ အခွင့်ကြုံပါ့မလား။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း က ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အဆုံးသတ်မလဲ ဆိုတာတော့ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ် မှာ ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ကြပါ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့မှာ မိုးတွေသည်းနေပါတယ်…မိုးရေထဲမှာပဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုနှစ်ခု…ဗစ်ကရမ်စီသီးဟာ ယူကေနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များတဲ့ ဝတ္ထုရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ… သူဟာ ကတ်သရင်းဆိုတဲ့ foreigner အမျိုးသမီးနဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်… တစ်နေ့ သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကတ်သရင်း သေဆုံးနေခဲ့ပါတယ်… ချက်ချင်းပဲ သူရဲကိုဖုန်းဆက်တယ်… ရဲတွေက သူသတ်တယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်…ဗစ်ကရမ်ဟာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ခြေဦးတည့်ရာကားမောင်းပြေးပါတော့တယ်…. ကားအရှိန်လွန်ပြီး တိမ်းမှောက်ခဲ့ပါတယ်… ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဗစ်ကရမ်ဟာ နီးစပ်ရာ အိမ်ထဲဝင်ပြီး အိမ်ပိုင်ရှင် မာယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကို အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်… ဒီကူညီပေးတဲ့အိမ်မှာလဲ လူသတ်မှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်… မာယာခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရှက်ကာ ဆိုတဲ့ သူသေဆုံးနေတာပါ… ဗစ်ကရမ်အမှုကို မွန်ဘိုင်းထိပ်တန်းစုံထောက် ဒေ့ဗ် တာဝန်ယူရပါတယ်… ဒေ့ဗ်ဟာ မာယာနဲ့ ဗစ်ကရမ်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်များကို နားထောင်ရပါတယ်….ဗစ်ကရမ်ထွက်ဆိုချက် ================ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကတ်သရင်း အသက်မရှိတော့ပါဘူး…ကျွန်တော်ရဲကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားခဲ့တယ်..ဒါပေမဲ့ရဲတွေက ကျွန်တော့်ကို မိန်းမကို သတ်တယ် ရဲစခန်းလိုက်ခဲ့ဖို့ ခြိမ်းခြောက်ကြတယ်..ကျွန်တော်လဲ ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးမိတယ်… ကျွန်တော် အိမ်တစ်အိမ်ကို အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်..မာယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကူညီပေးတယ်… သူ့ယောကျာ်းပြန်မရောက်သေးဘူးတဲ့..သူက အတော်ကူညီပေးရှာပါတယ်… ကျွန်တော့်ဒဏ်ရာကိုဆေးထည့်ပေးတယ်…သောက်စရာပေးတယ်… အဲ့အချိန်သူ့ခင်ပွန်းရှက်ကာ ရောက်လာတယ်...ရှက်ကာက ရှေ့နေတစ်ယောက်တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ မာယာပြောခဲ့တယ်…ခဏကြာတော့ ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိ…မေ့လဲသွားတယ်… ကျွန်တော်နိုးလာတော့ ရှက်ကာအလောင်းကိုတွေ့တယ်…မာယာထွက်ဆိုချက် ===============ကျွန်မ တံခါးဘဲလ်တီးသံကြားလိုက်တယ်… ဖွင့်ကြည့်တော့ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး… တံခါးပြန်ပိတ်မယ့်အချိန်မှာပဲ လူတစ်ယောက် ကျွန်မကို အတင်းဖမ်းထားတယ်… ကျွန်မလဲ ကြောက်လန့်ခဲ့တယ်… သူက ကျွန်မ အိမ်မှာဘယ်သူရှိလဲမေးတယ်…ဓားနဲ့ခြိမ်းခြောက်တယ်…အဲ့အချိန်မှာ ရှက်ကာအလုပ်က ပြန်လာတယ်…ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ကြတယ်… ရှက်ကာနဲ့အဲ့လူလုံးထွေးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မ ရဲကားအသံကြားတော့ အောက်ပြေးဆင်းပြီး အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်…ကျွန်မပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ရှက်ကာ အသက်မရှိတော့ဘူး….ဒေ့ဗ်ဟာ ထွက်ဆိုချက်နှစ်မျိုးလုံးကို နားထောင်ပြီး ဝေခွဲမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… ဗစ်ကရမ်က ထွက်ပြေးပြီး မာယာအိမ်မှာ မေ့လဲသွားတာလား…. မာယာက သူ့ခင်ပွန်းကို သူကိုယ်တိုင်သတ်တာလား…ဗစ်ကရမ်က အပြစ်မရှိဘဲခံလိုက်ရတာလား… ကတ်သရင်းသေဆုံးမှုကကော ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လို သေဆုံးမှုဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာကို… ပဟေဠိဆန်ဆန် ဖြေရှင်းချက် သုံးသပ်ချက်များနဲ့ ရိုက်ကူးထားပါတယ်… CM ပရိတ်သတ်ကလဲ ဘယ်သူက လူသတ်တရားခံလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ…
ငယ်ငယ်တုန်းကစွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေကိုအကုန်ချိတ်ဆက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်မိတဲ့အခိုက်အတန့် အားလုံးရဲ့ကလေးဘဝမှာ ရှိခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ဒီလိုအချိတ်အဆက်မိမိ Fairytalesတွေကို ဇာတ်လမ်းကျောရိုးတစ်ခုထဲမှာ ပေါင်းစုဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ပေမယ့် ဒါကပဲ ဒီကားလေးရဲ့ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောပါရစေ။Johny Deep,Anna Kendrick,Emily Bluntစတဲ့နာမည်ကျော်တွေအများအပြား ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီကားလေးကတော့ မှော်ဆန်ဆန်ကားလေးတွေကို သဘာဝကျကျကြည့်ချင်သူတွေအဖို့တော့အံကိုက်ပါပဲ။Musical Dramaသဘောမျိုးလေးလဲပါလို့ မပျင်းမရိမြူးမြူးကြွကြွကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
I, Tonya(2017)IMDb….7.5,,,,Rotten…89 Biography တွေကိုပြန်ရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ အထူးသဖြင့် ကြည့်ရှှုသူပရိတ်သတ်ကိုပြန်ပြောလေ့ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် အများအားဖြင့် အတော်လေးပျင်းရိဖွယ်ကောင်းလှတယ်…ဖြစ်ရပ်မှန်ဆိုတဲ့ ဘောင်ကြီးကွပ်ထားလေတော့ဒါရိုက်တာက မူရင်းနဲ့ သွေဖီမသွားအောင်ရိုက်ရင်း ကြည့်ရှုသူအနေနဲ့ ပျင်းသွားတတ်တယ်…အဲ့လိုကားတွေထဲမှ ရေခဲစကိတ်စီးအားကစားမယ် Tonya Harding အကြောင်းကိုရိုက်ထားတဲ့ ယ္ခုဇာတ်ကားကတော့ ပျင်းရိစရာမကောင်းတဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းအစမှ အဆုံးထိ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလှတယ်…Tonya ရဲ့ငယ်ဘဝ၊ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အကြင်နာမဲ့တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကနေ စရိုက်ဆန်တဲ့ အပျိုပေါက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပုံတွေ၊ သူမဘဝတစ်ခုလုံးနီးပါးကို နောင်မှာ ဖျက်ဆီးပစ်လာမဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်မိပြီး အိမ်ထောင်ကျကာ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပုံတွေ၊ သူမအားကစားလောကရဲ့ဘဝအနိမ့်အမြင့်တွေ၊ အနိုင် အရှုံးတွေနဲ့သူမဘဝတစ်ခုလုံးကို အပြောင်းအလဲဖြစ်လာစေမဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်လာပုံတွေကို တင်ပြသွားခဲ့တယ်။ ရေခဲစကိတ်အကြောင်းကိုစိတ်မဝင်စား Tonya Harding ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ကျွန်တော်ဟာ ဒီကားကြည့်ပြီး သူ့အကြောင်းတွေပြေးဖတ်ရ နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းတွေကိုကားကောင်းမို့ကြည့်ဖို့ ညွှန်းဆိုရနဲ့။ခင်ဗျားဟာ Drama ကြိုက်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဖိုက်တင်ကားတွေကြိုက်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုရုပ်ရှင်အမျိုးအစကားကိုပဲကြိုက်ကြိုက်ဒီကားလေးကိုတော့ကြည့်စေချင်တယ်…မင်းသမီးချောMagot Robbie ရဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးသောသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အော်စကာဆန်ကာတင်စာရင်းလည်းဝင်ခဲ့တယ်…ဇာတ်လမ်းကို ၁၀မိနစ်လောက်လေးပဲမြည်းစမ်းစေချင်တယ်….ဆက်ကြည့်ဖို့မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့………
<p>IMDB 6/10 ရရှိထားတဲ့ Netflix Origin Comedy/Romance ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုမပြောခင် အချောလေး Noah Centineo ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် အဟွင်းဟွင်း
ကိုယ်တွေလို သြင်္ကန်မှာအိမ်တွင်းပုန်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ရှယ်ပဲဘရွတ်ရက်တီကန်ဆိုတဲ့ ၁၈နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသားလေးရဲ့ဘဝကို အခြေပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတဆိုးလေးဘရွတ်ဟာ ဘဝကိုအရှုံးပေးထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့
နေထိုင်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကတော့ ကြီးလှပါတယ် အကောင်းဆုံးကားကိုစီးချင်တယ်ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးကောင်မလေးနဲ့တွဲချင်တယ်ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ကျောင်းကိုမှတက်ချင်တယ် အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေ
အမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားရာမှ ဖြစ်လာတဲ့ကမောက်ကမပေါင်းစုံကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်Spoil သလိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲဆက်လက်အားပေးလိုက်ပါဦးရှင်</p>
Power Range (2017)